Mitauro yekune dzimwe nyika matipi uye matipi Peji
Tag: Mitauro yekune dzimwe nyika nzira uye kuraira
SOS mazwi: sei kutanga hurukuro mumitauro yese?
ndima Tranquillus | Sep 20, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Kudzidza kutanga hurukuro mune mumwe mutauro mutauro wakakosha. Pane zvakawanda zvekutaura kuti uve nechokwadi chekuti unonzwisiswa, unonzwisisa uye unoita mukukurukurirana nemumwe munhu. "Handinzwisise", "unogona kuzvidzokorora", kana kunyangwe "chii chaunoti icho" zvirevo zviri nyore kudzidza izvo izvo zvichizokubatsira kuti uzvitaure muChirungu, ChiGerman, Spanish, Italian uye Brazilian Portuguese.
Nei uye sei kutanga hurukuro mune mumwe mutauro? ^
Kuita shuwa kuti iwe unonyatsonzwisiswa neako interlocutor ndiyo hwaro hwekutungamira uye kutanga hurukuro mune mumwe mutauro. Paunenge uchifamba kune imwe nyika kwausina kuraira kwakanaka kwemutauro, kuziva izwi iri kunogona kuponesa zvechokwadi mumamiriro mazhinji. Kuziva mataurire ekuti "unogona kuzvidzokorora?", "Unodaidza chii?" kana "unondinzwisisa here?" inogona chaizvo kukubatsira kujekesa mamiriro nemumwe munhu uye kuzviita unzwisisike.
Ehezve, kuziva matangiro ehurukuro hakuna kukwana kuti uve wakasununguka mumamiriro ese ezvinhu. Saka kuti udzidze mamwe mazwi, kuvandudza kana kugadzirisa mune mumwe mutauro, hapana chakafanana nekudzidzira nemutauro kudzidza kudzidza saMosaLingua. Uye kuti uve wakasununguka zvakanyanya mukutsinhana kwako kwese, dzidzisa nemumwe mutauro!
Saka iwe unowana saka mazwi nezvirevo pazasi kuti uone maitiro ekutanga hurukuro muChirungu, ChiGerman, Spanish, Italian uye Brazilian Portuguese. Izvo zvinongo sara kwatiri kuti tikushuvire iwe kuchinjana kwakanaka!
Iti "Ndiri French" ^
Chirungu: Ndiri American / Chirungu
ChiGerman: Ich bin Deutsche / r
ChiSpanish: Soy español (a)
Iti "Handinzwisise" ^
Chirungu: Handisi kunzwisisa
ChiGerman: Ich verstehe nicht
Italian: Kwete capisco / Kwete ho capito
ChiSpanish: Kwete lo entiendo
Tichiti "Unondinzwisisa here?" ...
Chirungu: Unondinzwisisa here?
ChiGerman: Verstehen Sie mich?
ChiSpanish: ¿Ini ndinopinda?
Iti "Pane munhu anotaura chiFrench here?" ...
Chirungu: Pane chero munhu anotaura Chirungu?
ChiGerman: Spricht nezuro jemand Deutsch?
Shona / Spanish: ¿Alguien habla inglés?
Iti "Unoti sei… mu [mutauro wakanangwa]?" ^
Chirungu: Unoti…… mu [mutauro unonangidzirwa]
ChiGerman: Wie sagt man… auf [Zielsprache]?
ChiItaly: Uya si duce… mu [lingua di arrivo]?
ChiSpanish: Cómo se dice… en [lengua de destino]
Iti "Unoti chii icho?" ...
Chirungu: Chii chinonzi izvi?
ChiGerman: Wie nennen Sie das?
Chiitaly: Huya chi chiami questo?
Shona Spanish: ó Cómo llamas a esto?
Iti "Chii chinoita…?" ^
ChiGerman: Akanga ari…?
Portuguese: Hausi kukosha…?
ChiSpanish: Chii chinorehwa…?
Iti "Zvishoma, ndapota" ^
Chirungu: Unogona kudzora pasi, ndapota?
ChiGerman: Langsamer, bitte.
Chiitaliyane: Più piano / lentamente, per favore
Shona Spanish: ¿Puedes hablar más despacio, por favor?
Iti "Handitaure (zvakanaka) [target mutauro]" ^
Chirungu: Handitaure [chakanangwa mutauro] (zvakanaka kwazvo)
ChiGerman: Ich spreche kein / nicht so gut [Zielsprache]
Italian: Kwete parlo (bene) [lingua di arrivo]
Shona: Hapana hablo [lengua destino] (muy bien)
Iti "Ndinotaura (zvishoma) [mutauro unonangidzirwa]" ^
Chirungu: Ini ndinotaura (zvishoma) [tarisiro mutauro]
ChiGerman: Ich spreche (ein bisschen) [Zielsprache]
Shona Spanish: Hablo (un poco) [lengua de destino]
Ndichiti "Hauna kundinzwisisa" ...
Chirungu: Ndinofunga hauna kundinzwisisa
ChiGerman: Sie haben mich falsch verstanden
Chiputukezi: Você ini ndakanzwa zvakaipa
Italian: Lei mi ha capito murume
Spanish: Creo que kwete ini ndanzwa
Iti "Unogona kuzvidzokorora ndapota?" ^
Chirungu: Unogona kudzokorora izvo, ndapota? / Taurazve?
ChiGerman: Kannst du das bitte wiederholen?
ChiSpanish: ¿Me lo puedes repetir, por favor?
Iti "Ndiri kudzidza [mutauro wakanangwa]" ^
Chirungu: Ndiri kudzidza [mutauro wakanangwa]
ChiGerman: Ich lerne [lZielsprache]
Shona Spanish: Estoy aprendiendo [lengua de estudio]
Iye zvino zvawave kuziva kutanga hurukuro muumwe mutauro ...
Hezvinoi! Iye zvino unoziva kutanga hurukuro mune mumwe mutauro mune mitauro mishanu inobatsira pasi rese. Saka kunyangwe iwe usinga farire kugona kutaura chero mune mitauro iyi, unogona kumbobuda mune dzimwe nguva… mamiriro akaomarara!
Kuenda kumberi ^
Wakafarira chinyorwa ichi?
Waita zvakanaka nekuverenga ichi chinyorwa kusvika kumagumo. Wakafungei nezvazvo? Ndokumbira utisiire tsamba, inotikurudzira kunyora zvimwe zvinyorwa
Kutenda vhoti yako
Kungodzvanya zvishoma hakubhadhare chero chinhu, asi zvakakosha kwatiri.
Unoda kutanga ipapo ipapo?
Kutanga kudzidza mutauro mahara
Chinyorwa ichi chinoita kuti iwe ude kudzidza mumwe kana mimwe mitauro?
Tine nhau mbiri huru… Yekutanga: isu tinogona kukubatsira iwe .. Yechipiri nhau dzakanaka: unogona kutanga mahara uye izvozvi! Shandisa muyedzo wako wepachena uye tora mukana weiyi nzira inoshanda yekudzidza mitauro kwemazuva gumi nemashanu.
Flashcards yekudzidza mazwi, mavhidhiyo mune yepakutanga vhezheni ine zvinyorwa zvidiki, mabhuku ekuteerera, zvinyorwa zvakaenzanisirwa padanho rako: MosaLingua Premium (Webhu & Nhare) inokupa mukana kune izvi zvese, uye nezvimwe zvakawanda! Kutanga ipapo ipapo (zviri mahara uye hazvina njodzi).
ndima Tranquillus | Nyamavhuvhu 30, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Wati wambonzwa here sekunge iwe waive wakasviba, usina hunhu kana pane zvinopesana unonzwira tsitsi uye wakasvinura-pfungwa paunenge uchitaura mune mumwe mutauro? Zvinoitika! Chokwadi, zvidzidzo zvakawanda zvinowanzo simbisa kuti kudzidza mutauro mutsva kunogona kuchinja maitiro ako kune vamwe ... kana iwe pachako! Kudzidza mutauro kunogona kusvika papi kusvika pakuva mushandirapamwe wekusimudzira wega? Ndozvatichatsanangura! Ongororo dzinoverengeka dzakaratidza kuti kudzidza mutauro kunotungamira mukuchinja kwehunhu.
Vatsvakurudzi vava kubvumirana: kudzidza mutauro kunotungamira mukuchinja kwehunhu hwevadzidzi. Zvidzidzo zvekutanga pamusoro penyaya iyi zvakaitwa muma60 nema psycholinguist Susan Ervin-Tripp, piyona muzvidzidzo zvepfungwa uye kusimudzira mutauro pakati pemitauro miviri. Susan Ervin-Trip zvakanyanyisa kuitisa zvidzidzo zvekutanga zvekuyedza nevanhu vaviri vanotaura mitauro miviri. Aida kuongorora zvakadzama fungidziro yekuti zvirimo mumitauro miviri zvinoshanduka zvichienderana nemutauro.
Muna 1968, Susan Ervin-Trip akasarudza semusoro wenyaya yekudzidza vakadzi verudzi rweJapan vanogara muSan Francisco uye vakaroora maAmerican. Isolate kubva kunharaunda yeJapan iyo yaigara muAmerica, vakadzi ava vaive nemikana mishoma kwazvo yekutaura chiJapanese. Bvunzo remibvunzo rakagadzirwa naSusan Ervin-Trip rakakurudzirwa kuti rinobatanidza manzwiro nemamiriro ezvinhu anotevera: "kana zvishuwo zvangu zvasiyana nezvedzinza rangu, ndinonzwa…". Kana vatauri vechiJapane vainyanya kutsanangura manzwiro "enhamo huru" muchiJapan, manzwiro akaburitswa muChirungu aive akasiyana zvakanyanya sezvo yaive "simba rekuita maererano nezvido zvemunhu" izvo zvakazoiswa pamberi - chinhu chakasimba.
Zvinongoitika zvoga? Zvichida kwete: isu tinowana uyu musiyano mukududzirwa muchidzidzo cheethnographic chakaitwa mu1998 nemuongorori Michele Koven pakati pevanhu vakuru veParis vakatamira kuPortugal, kwavakakumbira kurondedzera zvimwe zviitiko zveumwe neumwe mumitauro iyi (chiFrench nechiPutukezi) . Mhedzisiro yacho yakaratidza kukosha kwehunhu. Nekudaro, vakadzi vaiwanzoda kudzivirira mazano avo mune nyaya muchiFrench, nepo ivo vakaita mvumo yakawanda pakutaura chiPutukezi.
Mufananidzo naLucille Duchêne
Uye hazvisi izvo zvese: hunhu hwavo hwakashandurwawo zvichienderana nemutauro wenyaya yakashandiswa. Michele Koven akabvunza vatori vechikamu kuti vazvitsanangure, nguva dzose mumitauro miviri. Mumwe wavo, uyo akazvitsanangura se "mutyairi ane hasha" paakataura chiFrench, akasarudza kuzvitsanangura se "akagumbuka, ane hunhu uye murwere mubhengi mutengi uyo asingade kukwevera kwaari. Nekuda kwekuti iye mutorwa ”paakataura muchiPutukezi.
Zvidzidzo zviviri izvi zvinotiudzei? Zviri nyore: kuti ugone kuburitsa pfungwa dzako nenzira kwayo nemutauro wekunze, zvakakosha kuti udzidze nekushandisa duramazwi chairo uye rakasiyana. Icho chiri chikonzero ichi kuti iyo Babbel nzira yakavakirwa pane hurukuro dzekudzidzira dzinoenderana zvakakwana kune akasiyana kudzidza mamiriro.
Chii chaunofarira iwe? Hazvisi nyore chete kuwana nguva shoma yakachengeterwa kudzidza mutauro mune yako purogiramu, asi madingindira ezvidzidzo anoenderanawo nezvaunofarira. Yakagadzirwa nenyanzvi mune zvemitauro uye mitauro yakawanda, Babbel makosi akagadzirirwa kukubatsira iwe kuwedzera mazwi ako uye ruzivo rwako rwemutauro zvinoenderana nezvinangwa zvako wega. Iyo yakanaka nzira yekubatanidza yako pachako kukura uye kubudirira, haufunge?
Nekudaro, nepo zvidzidzo izvi zvichiratidza mibairo mikuru, ivo vanofanirwa kuverengerwa nekuchenjerera. Chokwadi, hapana kana chimwe chazvo chinofunga mamiriro ezvinhu akadzidziswa mitauro nevazvipiri, pamwe nekusiyana kuri pakati pemitauro iyi.
Sanganisa kukura kwako uye kudzidza
Mamiriro ezvinhu ekudzidza mutauro akakosha kuti unzwisise maonero acho, uye nekudaro kunzwa kwakanaka kana kwakashata kunobva kwairi. Chokwadi, kudzidza mutauro mutsva uchifamba, panguva yezvidzidzo zvake kana nekuda kwehunyanzvi zvikonzero hazvingagadzi maonero akafanana emutauro mumudzidzi, uyo asingazombove nerusununguko rwakafanana kumba. Taura nemutauro iwoyo. Semuenzaniso, kana mutauro ukaiswa, zvinowanzoitika kuti unofungidzirwa zvisina kunaka uye unokonzera kuvhara.
Mutori venhau wekuAmerican Robert Lane Greene nokudaro akajekesa chokwadi chekuti vanhu vanotaura mitauro miviri vanobatanidza mutauro wekunze nemamiriro ezvinhu uye kunyanya nezviitiko zvepamoyo mukati mehupenyu hwavo. Aya mamwe mamiriro ezvinhu anokanganisa manzwiro akasangana.
Ndicho chikonzero ichi kuti nzira yeBabbel yakavakirwa pamaminetsi gumi nemashanu ezvidzidzo akatarisana nemitambo yekukurukurirana inoenderana zvakakwana nemamiriro akasiyana ekudzidza. Kwete chete kuti zvinova nyore kwazvo kubatanidza kudzidza mutauro mune yako purogiramu, asi madingindira anokurukurwa muzvidzidzo anoenderana nezvaunofarira. Chikomborero chekusimudzira kwako wega!
Mutauro watinotaura unokanganisa maonero atinoita nyika
Kana, sezvataona, mamiriro ekudzidza anoita basa rakakosha, ko zvakadii nevanhu vakatodzidza mutauro? Nyaya ye polyglots inonyanya kufadza: zvirokwazvo, zvidzidzo zvakawanda zvinowanzo kuratidza kuti yekupedzisira inobudirira zvakanyanya kana zvishoma zvichienderana nemutauro unoshandiswa. Ongororo dzinoverengeka dzinoratidza kuti chimiro chemutauro chinogona kugadzirisa uyezve kukanganisa nzira yedu yekufunga, yekufunga… uye nekudaro kubudirira.
Wilhelm von Humboldt, aive Gurukota rePrussia reHurumende uye muvambi weYunivhesiti nyowani yeBerlin, anozivikanwa nekushanda pachirongwa cheanthropology kuratidza marudzi. Mutauro waive wekutanga chinhu mukutsanangurwa kwenzanga yevanhu: sekureva kwake, mitauro inopa chiratidzo chenyika yakanangana nenzanga yega yega yevanhu. Anotenda kuti chiono chedu chenyika chiratidzo chemutauro wedu netsika nemagariro. Kutaura mutauro wechipiri nekudaro zvinowanzo shandura maonero edu uye zvinotibvumidza kuona nharaunda yedu kubva kune imwe kona.
Zvimwe zvidzidzo, zvakaita seizvo zvemitauro zvine hukama zvakaitwa nemaAmerican linguists Edward Sapir naBenjamin Lee Whorf muma50s, vakaratidza hukama hwakasimba pakati pemitauro nepfungwa chaiyo yepasi. Sekureva kwavo, varume vanorarama zvinoenderana netsika nemagariro avo, uye vachizviratidza kuburikidza nemutauro unotaurwa.
Rarama nekutsvaga vhezheni itsva yako
Kubva pakuona kwekudzidza mutauro, izvi zvakasiyana zvidzidzo zvinowanzo kuratidza kuti kuwanda kwemitauro nekusimudzira kwega zvakabatana. Zvinhu zvakati wandei zvinotsanangura kunzwa kwekunzwa "zvimwe" kana iwe uchitaura mumwe mutauro.
Musiyano mukugona kwemitauro: zvinoenderana nedanho rekugona kwemitauro, zvinokwanisika kukwanisa kuzviburitsa zvirinani pazvikamu zvakasiyana zvezvidzidzo uye kunyanya kugona kutaura nezve manzwiro ako kana kuita irony uye majee.
Musiyano mutsika: mutauro wekunze unoreva kusangana nekuswedera padyo netsika yekune dzimwe nyika. Panyaya yevanhu vane mitauro miviri vane mwero wakafanana mumitauro miviri kana kudarika, manzwiro akasiyana neaya erurimi rwaamai anoumbwa.
Misiyano yemitauro: Girama uye syntax yemutauro zvinosiyana kubva kune mumwe mutauro uchienda kune mumwe, izvo zvinoshandura nzira yekutaura.
Zvese izvi zvinhu zvakasiyana zvinokanganisa hunhu hwedu nekuti zvinopa mukana wekufunga mumutauro wakasiyana nerurimi rwedu, iro pacharo rine tsika yakasarudzika. Dzakawanda nzira dzakasiyana dzekuziva nekududzira nyika, uye zvichidaro nekubudirira mairi. Saka chii chauri kumirira kuti udzidze mutauro mutsva neBabbel?
Mashandisiro ekushandisa mifananidzo yepfungwa kuti ubate nemusoro zviri nani? - VIDEO
ndima Tranquillus | Nyamavhuvhu 25, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Iwe unoda kuvandudza mumutauro wako wekutarisa nekukurumidza here? Kushandisa mifananidzo yepfungwa kunogona kukubatsira kuzadzisa chinangwa chako. Iyi nzira inoshanda sei? Lisa Joy, mumwe wevadzidzisi vedu veChirungu kuMosaLingua uye anodzidza mutauro iye, anokupa nzira ina dzekugadzira mifananidzo inoshanda yepfungwa inogona kukubatsira kunatsiridza ndangariro yako uye kudzidza mutauro.
Shandisa mifananidzo yepfungwa kuti uvandudze mune yako mutauro mutauro ^
Vanenge 65% yevagari vemo vanoona vadzidzi, zvinoreva kuti pane mukana wakanaka iwe uri. Chokwadi, huropi hwedu hunowedzera kushanda nekutitumira mifananidzo.
Heino bvunzo yekukurumidza kuti unzwisise zvirinani! Funga nezverwendo rwako rwekupedzisira kuenda kuchitoro uye edza kuyeuka ruzivo rwakawanda sezvazvinogona. Funga nezvezvinhu chaizvo zvakaita sezvinhu zvawakatenga, kana iwe ukatora tswanda kana ngoro yekutengera, kana iwe uripo wega kana nemumwe munhu, kuti iwe waibhadhara sei kumagumo… Usazeze kuvhara maziso ako kana izvozvo zvichikukodzera.
Unoyeuka sei chiitiko ichi mumusoro mako? Yakanga iri muchimiro chemazwi, kurira kana mifananidzo? Vazhinji vachapindura nemifananidzo. Kana zvirizvo, iwe unogona kunge uri mudzidzi anoona. Kana kuti pamwe une rumwe rudzi rwe info rwakamutsa ndangariro yako?
Iye zvino zvaunonzwisisa zvandinoreva kuti "huropi hwedu hunoshanda nekutumira mifananidzo kwatiri," ngatizvitorere padanho rinotevera uye teedzera zvinoitwa nendangariro nevangwaru.
Gadzira mifananidzo inoshanda yepfungwa yekudzidza ^
Munzvimbo yekudzidza mutauro, pane zano rekukubatsira iwe kuti udzidze matauriro matsva nekukurumidza uye nekubudirira. Izvo ndezve kushandisa mifananidzo yepfungwa nekuvabatanidza navo. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuyeuka iro chiFrench izwi "zuva", iwe uchavandudza mikana yako yekurirangarira kana iwe uchibatanidza iro izwi nekumiririra kwezuva kwezuva.
Zvichiri kushanda here? Kwete nguva dzose, nekuti zvinogona kunge zvakajairika. Neraki, kugadzira mifananidzo yepfungwa hakuna kunyanya kuomarara. Iwe uchadzidza kuzviita pano! Ive neshuwa yekugadzira mifananidzo ine imwechete kana kupfuura eaya mana maitiro.
mubatanidzwa usina kujairika
Ngatitarisei pane chimwe nechimwe chazvo kuti unzwisise zvirinani uye utange kuzvishandisa pakudzidza mutauro wako ipapo ipapo.
Mufananidzo wakanaka wepfungwa unofanirwa kuwedzeredzwa, zvinoreva kuti unofanirwa kunge uine zviyero uye zviyero zvisingaenderane nezvaunowanzoona. Semuenzaniso, kana iwe uchida kubata nemusoro izwi "pied" muchiFrench, unogona kufunga nezvemurume ane tsoka rimwe rakareba kupfuura rimwe. Kana kana iwe uchida kudzidza izwi rekuti unghia (chigunwe muchiTaliyana), chimbofungidzira mukadzi ane nzwara dzakareba kudaro dzinobata pasi! Zvakaoma kukanganwa aya marudzi emifananidzo.
Mubatanidzwa usina kujairika ...
Kuti ubate nemusoro izwi rekuti “bhuku”, funga nezvekatsi ichiverenga bhuku, ichiibata pakati pemakumbo ayo… kana kufunga nezvevatorwa vakapfeka magirazi ekurangarira izwi rekuti “magirazi” muchiItaly. Edza nzira iyi uye ufunge nezvayo semutambo.Inogona kunyatsonakidza!
Iko kufamba ...
Wanga uchiziva here kuti kutarisisa kwako kunosimudzirwa zvakanyanya nekufamba kupfuura nezvinhu zvakagadziriswa? Ichi ndicho chikonzero kufambisa mifananidzo kwakanyorwa zvirinani muuropi hwako: zvinoita kuti zvive zvakaoma kukanganwa. Kana iwe uchifanira kuyeuka izwi coche (mota muchiSpanish), zvirinani kufungidzira inofamba mota. Kana kana iwe uchifanira kurangarira izwi rekuti "dombo" muchiFrench, fungidzira dombo rinotenderera.
Manzwiro anoitawo basa rakakosha mundangariro dzako. Sezvo iwe ungangove wakanzwisisa kare, zvakaoma kwazvo kukanganwa nzvimbo dzakabatana neyakaipisisa chiitiko kana inosangana nenguva dzemufaro kana kusuwa. Isu tinowanzo shamisika kugona kuyeuka zvidiki diki zvezviyeuchidzo izvi, patinogona kupfuura chivakwa chimwe chete munzira yekuenda usingaone kana ruvara rwayo kana huwandu hwepasi hwahwo ...
Dai iwe waive wakura zvakakwana panguva iyoyo, pamwe unorangarira chaizvo kwawanga uri uye zvawanga uchiita pawakadzidza nezvezviitiko zvaGunyana 11, 2001, iro raive zuva rekushushikana. Saizvozvowo, pese paunodzidza izwi rekuti "imbwa" mumutauro mutsva, unogona kuzvibatanidza nechipfuwo chako.
Ndizvo zvose ! Ona kuti maitiro aya ari nyore sei? Inguva yako yekugadzira yako inoshanda mifananidzo yemafungiro! Goverana nesu mamwe emamwe mazano ako mune zvakataurwa uye utiudze kuti ndeapi eaya mana matekiniki aunofarira kushandisa.
Chinyorwa chekupedzisira kunyangwe: zvakanyanya ivo pachavo, zvichanyanya kuve nyore kuyeuka. Icho chiito chekufungidzira kumusoro kwepfungwa chifananidzo chinokubatsira iwe mukuyeuchidza maitiro. Mifananidzo yepfungwa inoshanda zvakanyanya kana iwe ukazvigadzira iwe pachako. Saka tanga kugadzira uye unakirwe!
Matipi ese pavhidhiyo ^
Unogona kuwana ese matipi aLisa-Joy pane vhidhiyo. Icho chiri muChirungu, asi kune zvinyorwa zvidiki muFrench (uye mimwe mitauro) kana zvichidikanwa. Dzvanya pavhiri kuti uvamise uye iwe unogona zvakare kudzora kumhanya kwedimikira kana zvichidikanwa.
[zvakasungwa zviri mukati]
Nyorera kuchiteshi chedu cheYouTube!
Kana chinyorwa ichi chakakufarira, inzwa wakasununguka kutarisa izvi zvakare:
Pazera ripi raunofanira kudzidza mutauro wekunze? Vakuru vanopupura!
ndima Tranquillus | Nyamavhuvhu 18, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Zera harisi chairo chipingaidzo pakudzidza mutauro wekunze. Vakasiya basa vane nguva yekuzvipira kune chitsva chiitiko chinovasimudzira. Zvinokurudzirwa zvakawandisa uye mabhenefiti anoonekwa munguva pfupi uyezve munguva refu. Uchenjeri hunouya nezera here? Vechidiki vanozivikanwa se "chipanje chemirimi" asi paunenge uchikura, unokwanisa kuongorora matambudziko ako nekushaya simba wozvikunda nekukurumidza kuitira kuti uve nemhedzisiro inoenderana nezvinotarisirwa. Tarisiro.
Pazera ripi raunofanira kudzidza mutauro wekunze?
Zvinowanzo taurwa kuti vana vane nguva iri nyore yekudzidza mutauro. Izvi zvinoreva here kuti vanhu vakuru vanozove nematambudziko akakura mukudzidza mumwe mutauro? Mhinduro: kwete, kutora kwacho kuchangove kwakasiyana. Vakuru saka vanofanirwa kuita nhamburiko dzakasiyana. Zvimwe zvidzidzo zvinotsanangura kuti zera rakaringana rekudzidza mutauro wekunze raizove kana uchinge uri mwana mudiki kwazvo, pakati pemakore matatu neatanhatu ekuberekwa, nekuti huropi hwaizogashira uye kusanduka. Vatsvagiri veMIT (Massachusetts Institute of Technology) vasvika pamhedziso yekuti kudzidza mutauro kunonyanya kuoma mushure memakore gumi nemasere nekuda kwezvikonzero zvetsika, zvipenyu uye zvepanyama. Nekudaro, kudzidza mutauro wekunze kune yakazotevera zera zvinokwanisika, zviri zvekuisa kurudziro uye kuomarara.
Chii chinokurudzira vanhu vakura kudzidza mutauro wekunze?
Iyo mitauro inonyanya kudzidziswa nevakuru…
Sekureva kweiyo Ifop kudzidza, 85% yevakuru vanoti ivo vanokwanisa kudzidza mutauro wekunze. Muzera redhijitari, vakuru vari kutora mukana wekushandisa nzira idzva dzekudzidza pamhepo. 91% yavo vanototenda kuti ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekugara nepfungwa. Chokwadi, kubvira pavakarega basa, vakuru vakuru vazhinji vanoramba vachidzidza zvinhu zvitsva! Ivo vari kugara vachiita zviitiko, kusanganisira dzimwe nguva kudzidza mitauro mitsva.
Pakati pemitauro inonyanya kufundwa nevakuru chiRungu (45%), chiSpanish (27%), chiItaly (19%) uye chiGerman (11%).
Zvekukura zvaunowana, zvinonyanya kutyisa kudzidza mutauro zvinogona kutaridzika. Nekudaro, iyo Ifop kudzidza inotiratidza isu kuti vakuru vakashinga uye vanoshinga mukudzokorora kwavo kupfuura vane makore 18-35 vane makore.
Mukana wekutanga ...
Takabvunza Henri, 75, akasiya basa muSaint Jean de Luz, chii chakamukurudzira kudzidza Spanish. Akatitsanangurira kuti aive nefurati muLira, Spain, kwaanozorora mumatsutso nemuchando, nekuti tembiricha dzakadzikama kupfuura muFrance. Anoda kunge achikwanisa kutaura nevanhu veko uye kuzviita kuti anzwisiswe paanoenda kwachiremba kana kukirabhu yegorofu. Sezvo aine nguva uye kurudziro yekudzidza, ari kufambira mberi nekukurumidza. Akatokwanisa kunyoresa nekirabhu yegorofu uye nevatambi vebridge, pese parunhare muSpanish! Akange achizvikudza zvikuru nekukwanisa kutitaurira nezve chiitiko chake naMosalingua.
Hupenyu hutsva trajectory ^
Kune zvikonzero zvakasiyana siyana zvekushingairira mitauro. Kurega basa kunosunungura zvipingamupinyi zvehunyanzvi, uye vazhinji vanowana mukana wakakwana wekuita mapurojekiti akagadzwa kwenguva yakareba, kuti vawedzere ruzivo rwavo, kukudziridza ruzivo, asi kwete chete. Kusarudza kutora pamudyandigere nekudzidza mutauro kunoratidza chishuwo chekutarisa patsva munzira itsva yehupenyu uye hukama nenyika.
Natsiridza kutaurirana nevaya vakakukomberedza ^
Chimwe chikonzero chingave chishuwo chekuvandudza kutaurirana, kuchinjana uye kugovana hunyanzvi. Vamwe vanhu vanoda kujairira mutauro unotaurwa mumhuri nharaunda. Ipo vamwe vachida kuzvidzidzira nemutauro wenyika iriko kuti vakwanise kuenda ikoko kunoona vana vavo nevazukuru. Nekudaro, iko kutsvaga kwehunyanzvi hwemitauro kunowanzo sanganisirwa nemuitiro wekushanya. 63% yevakuru vakapindura kuongororo yeIfop vanoratidza kuti vanodzidza mutauro wekutaurirana zvirinani pavanenge vachifamba pane kuita budiriro yavo (40%). Ivo saka vakagadzirira kuenda kumatoni matsva kune ruzivo rwekudzidza. Chokwadi, zvinofadza kwazvo kuchinjanisa musingagumi, pasina chinodzivirira mutauro, nevanhu veko. Nekuda kweizvozvo, isu tinoona kuti vazhinji uye vanhu vakura vari kutanga rwendo rwepasirese uye vamwe vanosarudza kushandisa mari yavo yekurega basa kunze kwenyika.
Batanidza zvakare nemidzi yako ...
Chimwe chinokurudzira vakwegura kuti vadzidze mutauro mutsva chishuwo chekutaurirana nerurimi rwaamai rwevabereki vavo kuti vatangezve kubatana nemhuri yavo midzi. SaSimone, makumi masere nemasere, ane mavambo echiGerman kuburikidza nasekuru naambuya vake, vanoshuvira kubatana patsika nemadzitateguru avo. Iye anoyeuka kukurukurirana muchiGerman achiri mudiki, nziyo dzaakadzidza achiri mudiki, uyezve tsika yacho yakarasika. Akafunga kutora zvidzidzo kuYunivhesiti, izvo zvakamutendera kuti anzwisise dzimwe nhetembo. Kudzidzira mutauro wemidzi yawo kunoreva kudzokera kunhoroondo uye kwayakatangira, pamwe kutosangana nemhuri nyowani?
Maitiro ekuchengetedza ndangariro yako nezera ^
Kuenda pamudyandigere kunogona kuita nhanho yakaoma, ndosaka kuzvinyudza mukudzidza mutauro inzira yakanaka yekuramba wakabatikana. Mune ino kesi, wadii kutora chinetso chitsva chekuzvipa iwe ushingi uye kukurudzira mweya? Chimwe chezvikonzero chikuru zvekunyoresa kudzidziswa ndechekuti iwe unogona kukurudzira uye kushanda pane yako ndangariro zuva nezuva kuitira kuti urwise kurwara kwehuropi. Chokwadi, ndangariro dzinoshandiswa zvakanyanya pakudzidza mitemo yegirama, mazwi ... Pamusoro pezvo, zvidzidzo zvakawanda zvinoratidza kuti kuwanikwa kwemutauro mutsva kunogona kuvandudza kugona kwevakwegura uye kudzivirira, kana kutononoka kutanga kwechirwere cheAlzheimer.
Sei uye pazera ripi kudzidza mutauro wekunze? ...
Tsvaga rutsigiro rwakakodzera ^
Pane mikana yakawanda yekudzidza mutauro wekunze. Zvidzidzo zvega zvega kana zveboka, kudzidziswa, kugara kwemitauro kune vakuru mukunyudza, Mahara Nguva maYunivhesiti kana maAll Ages maYunivhesiti (UTA), masangano emitauro yemuno, makosi epamhepo ... Ungave uri parunhare, komputa kana piritsi, kuburikidza nemaapplication, chero chinhu chiri zvinogoneka. Chinhu chikuru ndechekutsvaga chaiyo yekudzidzira svikiro zvinoenderana nezvido zvako nezvaunoda.
Tora nguva yekugadzira nharaunda inobatsira kudzidza. Kutenda kune internet, pane zvakawanda zvemukati zvekuvandudza. Iwe uchawana mapepanhau, mumhanzi, podcast, mafirimu, mibvunzo ... zvese zvaunoda kuti zviite sekuvaraidza sezvinobvira. Kana iwe uine 20 min mune iyo metro, 10 min mune yekumirira imba, usazeze kuvhura yako mutauro kudzidza kudzidza. Kudzidza mutauro mutsva kunoda chirango uye kurudziro.
Shinga kutaura! ^
Shinga kutaura, usatya kukanganisa, nekuti paunonyanya kudzidzira, ndipo paunonyanya kufambira mberi. Nenzira iyi, hukama hwehukama nevamwe hunogona kusimbiswa, nekuti kuve ne "tandem" mudiwa inzira yekuita kusangana kwepanyama uye chaiko. Kuzvivimba kwako kuchasimudzirwa uye chinodzivirira mutauro hachichazove dambudziko.
Shandisa nharembozha maapp ...
Mosalingua inopa nzira dzekudzidzira nekukurumidza pafoni, piritsi uye komputa. Zvisinei nezera rako, nzvimbo yako yekugara kana zvaunokurudzira, iwe unogara uine mudzidzisi wemitauro yekune dzimwe nyika padhuze kuti akusimbise. Maitiro acho haadi anopfuura maminetsi makumi maviri pazuva, uye mumwedzi mitatu munhu anogona kusvika padanho rakaringana kuti apinde munyika kana kuverenga magazini.
Usazeze zvakare, hazvina kunonoka kutanga! Asi usakanganwa kunakidzwa kupfuura zvimwe zvese.
Pazera ripi rekudzidza mutauro wekunze: kuenda kumberi ^
Kana uyu musoro uchikufarira, heino imwe chinyorwa iwe yaungade:
Bonjour Senior ndeye ruzivo uye yekuenzanisa chikuva chevakuru uye vanovachengeta. Isu tinopa anoshanda magwara, nhau uye rutsigiro mhinduro kumba kana mune yakakodzera pekugara nzvimbo.
Yedu yekutanga nhungamiro kumutauro wechiJapanese
ndima Tranquillus | Juil 15, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Mumutauro wechiJapan, inodaidzwa kuti DRM (Nihon). Izwi iri rakapa maJapan muchiFrench. Nekudaro, isu tinoda zita rekuti Japan. Rakanyorwa muchiFrench se "Pays du soleil levant", zvinonyanya kana zvishoma zvarinoreva mumutauro wenyika. Dhigi tsvuku pane chena kumashure. Zviratidzo zvinopfuura mazwi nemutauro uye zvinoratidzwa zvakare kuburikidza nemureza. Japan - kana Shanduro, nekudaro - inyika yakashongedzwa korona nezvakavanzika. Pakati peakanakisa mapuzzle ezvitsuwa: mutauro wechiJapan.
Saka izwi rekuti Japon muchiFrench rinobva kupi (uye rakaenzana naro mune mimwe mitauro mizhinji yepasi)? Kana vafambi vechiPutukezi vasvika negungwa kuFar East, ndivo maMandarin vanopfuudza zita ravo rezvitsuwa zveJapan kwavari. Inodudzwa "Jipangu", zita renzvimbo yacho rinobva rave Japan!
Nevadzidzi ve21.000 muFrance mu2018, mutauro wechiJapan unoramba uri kumashure kwazvo kwemamirioni evadzidzi veChirungu kana Spanish. Asi gore rimwe nerimwe, mutauro weMishima unoramba uchipenya mhiri kweGungwa reJapan neMount Fuji. Babbel inokupa iwe mutauro uye mutsika kuwanikwa kweJapan!
Nhoroondo yemutauro wechiJapan kubva panguva yeYamato kusvika panguva "Yakanakisa Japan"
Inenge mazana maviri nemakumi mashanu, imba yekutanga yakagadzwa mudunhu reYamato - ikozvino Nara prefecture. Iko panorama nhasi kuchinjika pakati pezvivakwa zvazvino netembere dzekare, zvobva zvatanga shanduko refu yemutauro wechiJapanese. Zvishoma zvinyorwa zvakanyorwa zviripo nguva ino isati yatanga. Kwemazana emakore mazhinji, mutauro wechiJapan sezvawakange uripo yaive tsika yemuromo. Iwo mamonki echiBuddha anobva kuChina anounza yavo graphic system kuzvitsuwa. Muzana ramakore rechisere, pasi penguva yaNara, maJapan akatanga kushandisa pfungwa dzeChinese. Mamwe magwaro akazogadzirwa kuti aumbe ino sanganiswa system yakajairika yeJapan iyo nzvimbo yezvitsuwa iri kuramba ichishandisa nhasi.
Yakanga isiri nguva yeEdo, pakati pezana ramakore rechi1903 nerechiXNUMX, apo mutauro wechiJapan wakanyatsoitwa. Nguva imwe neimwe nyowani inounza mugove wayo weshanduko yetsika nemitauro. Pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX, nguva yeMeiji, yakafanana nekufambira mberi uye nekuvandudza nyika, inoisa mutauro pachimiro chemutauro weTokyo. Muna XNUMX, hurumende yeJapan yakaburitsa bhuku repamutemo remutauro wechiJapan rakaitirwa zvikoro.
Maitiro anoyeuchidza nezvekumisikidzwa kweiyo Italian neFlorentine mutauro kana kutorwa kwemutauro weParis mushure meFrance Revolution!
"Yakanaka Japan": apo Tokyo inopinda kawaii era
Iko kunakidzwa kwemutauro wechiJapan hakugadzikane kubva kune iwo etsika yawo. J-Pop, manga, anime, mitambo yemavhidhiyo, sushi uye nekuda: inonzi "Yakanaka Japan", simba reJapan rakapfava rinotora mafomu mazhinji. Kubva Pikachu kuenda kuna Hello Kitty, kusanganisira bento mabhokisi uye kimono, kawaii (か わ い い), "akanaka" muchiFrench, ipfungwa ine fashoni yakakwanisa kuendeswa kunze kwenyika. Kusanganisira muFrance.
Kunyangwe neyakaitika nhoroondo yeJapan yekuzviparadzanisa, chitsuwa ichi chave nenguva chakamisidzana hukama neFrance. Zviratidzo zvekunatsiridza, mutauro wechiFrench netsika zvakafadza zvizvarwa zvechiJapan… kusvika pakukonzeresa kusagadzikana kwepfungwa chaiko! Ivo vava mazana maviri ezviuru ekudzidza mutauro weMolière. Pakati pemupendi Foujita, shefu Takeuchi uye muvambi weKenzo brand, maJapan mazhinji akabatsira pesvedzero yetsika yavo, mumarejista akasiyana, nekugara muParis.
Tinotaura kupi chiJapan nhasi?
Mutauro wechiJapan izvozvi une mamirioni zana evatauri. Chaizvoizvo inotaurwa muJapan, chiJapan chakagadzwa muCalifornia neHawaii, kunyangwe iko kushandiswa kwemutauro kuri kuda kunyangarika ipapo. Anopfuura makiromita zviuru zvitatu kumaodzanyemba kweHonshū, chitsuwa chidiki chakambotorwa neJapan chinoramba chichiziva chiJapanese. Iyi ndiyo Angaur, imwe yenyika gumi nenomwe dzinoti Palau. Muchokwadi, pachitsuwa ichi chePacific icho chine vangangoita vanopfuura zana vagari uye nharaunda yakaenzana neyechigumi nemashanu arrondissement yeParis, chiJapan chakatsakatika.
Hiragana, katakana uye kanjis: iwo matatu magwaro emutauro wechiJapan
Kunyorwa kweJapan kunoenderana nemavara akati wandei:
H Iyo hiragana
🗾 Iyo katakana
Kudzidza Hiragana naKatakana (100 zviratidzo mune zvese) hazvizokutore iwe yakareba kupfuura mavara eCyrillic. Zvakafanana neyechiLatin tsamba system, hiragana zviratidzo zvefonetiki zvinoshandiswa kunyora mazwi echiJapan. Pamutemo iwoyo, katakana dzakachengeterwa mazwi ekune imwe nyika mavambo (kunze kweChinese). Kana iri kanjis, ivo vakagara nhaka kubva kuChinese mutauro. Chiratidzo chega chega chine ruzha uye zvarinoreva. Kana maJapan akaverenga zviuru makumi mashanu, "chete" zviuru zviviri zvacho zvinokwana zuva nezuva. Iko kune yepamutemo runyorwa rweaya "zvakajairika kushandisa kanjis" inonzi jōyō kanji. Nekudaro, aya matatu maficha masisitimu anogara pamwe uye anoshandiswa pamwechete. Hazvishamise kuwana ese matatu magwaro mukati memutsara mumwe chete.
Mitauro yechiJapanese neyeChinese yemhuri imwe chete here? Aihwa ! Nhaka yema kanjis ndeyechokwadi nhoroondo. Linguistic genetics haiuyi mukutamba. Mandarin mutauro weSino-Tibetan, une hukama nemitauro yeChinese. ChiJapan chakazviparadzanisa nevamwe. Mune mamwe mazwi, mutauro uyu unoumba mhuri iri kwayo yoga. Dzidziso yemitauro yeAltaic, iyo ine chinangwa chekuunza pamwechete chiJapanese, chiTurkey, chiMongolia kana chiKorea ichiri kukakavara!
Mutauro wechiJapan: mutauro wakaomarara… kana kushoma kuzivikanwa?
Chinese, Russian, Arabic… vekuMadokero vanokodzera kunge mitauro yakaoma iyo isinganzwisisike uye iri kure nepfungwa yavo. Uye mutauro weMishima hauna kusara. Saka, mutauro wechiJapan unonetsa here kudzidza… kana kungozivikanwa zvishoma?
Kunze kwezvipingamupinyi zvekunyora uye mazwi ane zvishoma zvakafanana nemitauro yeIndo-European, mutauro wechiJapan unoshandisa iyo SOV (Chidzidzo-Chinhu-Verb) chimiro. MuJapan saka achati "Ini ndinodya chingwa" uye kwete "Ini ndinodya chingwa" (SVO chimiro, Chidzidzo-Chiito-Chinhu). Kana iko kushandiswa kuchiratidzika kunge kuchipesana-kujeka kumunhu wechiFrench, mitauro yeSVV yakawandisa kupfuura mitauro yeSVO pasi rose! Turkish, Persian, Basque, uye Latin mimwe mimwe mienzaniso yemitauro yeSOV. MuJapan, nyaya yacho inowanzo kusiiwa kana ichitsanangurwa nezviri kuitika, hazvishamise kupedzisira uine chimiro chakareruka cherudzi rweOV.
SOV, SVO, VSO,…? Kuwedzera kune iyo SOV uye SVO mitauro iyo yega inoumba makota matatu emadimikira epasirese, mamwe ese mabatanidzwa anowanikwa aripo:
Mitauro yeVSO, yerudzi rweVerb-Subject-Object ("idya ini chingwa"), senge chiArabic kana chiIrish Gaelic; mitauro yeVOS, yerudzi rweVerb-Object-Subject ("idya chingwa ini"), senge Malagasy; Mitauro yeOVS, yeiyo Object-Verb-Subject mhando ("chingwa chandinodya ini"), senge mimwe mitauro yeAmerindian; mitauro yeOSV, yeiyo Object-Subject-Verb mhando ("chingwa chandinodya"), zvakanyanya kushomeka… kunze yenzira yekutaura zvakadaro hunhu hwaYoda mu Star Wars!
Kunyange zvakadaro, vadzidzi vechiJapan vanogona kufara nedzimwe nhau dzegirama dzakanaka:
🗾 ChiJapan haina huwandu
🗾 ChiJapan haina zvirevo uye zvisina kujeka
Pakati pezvimwe zvakasarudzika zvechiJapane, mutauro hauna mazwi akazvitsaurira kuratidza mwedzi, saNdira, Kukadzi, Kurume, nezvimwe. Zvakare, maJapan vanobatanidza kanji 月 (mwedzi, uye zvisina kunangana mwedzi) nenhamba yemwedzi!
Mutauro wakapusa kana wakaomarara, hatifanire kuregeredza kukosha kwekurudziro pakudzidza. Mutauro wega wega une zvakasarudzika zvinoita kuti zvive nyore kana kuomera mutauri akapiwa.
ChiPutukezi madudziro: dzidza kutaura Chiputukezi kunge wekuzvarwa
ndima Tranquillus | Juil 14, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Kuti udzidze chiPutukezi, zvakakosha kuti utarise pamataurirwo acho. Iwe uchaona kuti kududzwa kwechiPutukezi hakuna kuomera vatauri veFrance, nekuti ruzhinji rwemavara runodudzwa nenzira imwecheteyo muchiFrench! Pamusoro pezvo, manzwi mazhinji (manzwi etsamba kana musanganiswa wetsamba) zvakafananawo. Ehezve, mataurirwo echiPutukezi anosiyana zvichienderana nekwaunoenda, asi iri gwaro kududziro yechiPutukezi rinokutendera kuti uzvitaure uye unzwisiswe kwese kupi. Huya uone mabrazil Portuguese!
ChiPutukezi madudziro: zvese zvaunoda kuti uzive kuti utaure zvakanaka ^
Nevanopfuura mamirioni mazana maviri nemakumi maviri emitauro yekutaura vachitaura mutauro uyu kunenge kondinendi yega yega (Asia, Europe, Africa, uye uko kune vazhinji, America), Chiputukezi chiri pakati pemitauro inonyanya kutaurwa pasi rose. Saka zvakasikwa kuda kuzvidzidza. Saka isu tichazotarisa pano pamadudziro ePortugal eBrazil, nyika ine vatauri vechiPutukezi. Asi usazvidya moyo, vatauri vechiPutukezi vanobva kune dzimwe nyika vanokunzwisisa chaizvo, zvakare kana uchida kuenda kuPortugal kana kuAngola semuenzaniso.
Kuti uzive kududza chiPutukezi, unofanira kutanga wadzidza mavara ako. Pano, hapana matambudziko pakutanga kuona, zvakafanana neyedu. Tsamba makumi maviri dzinodudzwa kana kuva ne "maitiro" akafanana neechiFrench: A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, V, W , X, Y uye Z. Mavara K, W, X uye Y achangobva kuwedzerwa kune alfabheti yechiPutukezi nekuti mavara anowanzoshandiswa mune mamwe mazwi ekunze.
Kuita kuti zvive nyore kwauri, isu ticharamba tichivaona vese. Chokwadi, kana iwe uchida kugona kuverenga uye / kana kududza mazwi muchiPutukezi nenzira kwayo, unofanirwa kutanga waisa pfungwa pamataurirwo avo.
Chenjera zvakadaro! Zvamuchawana pano ndiyo mitemo mune zvese. Panogona kunge paine kusiyaniswa kana kududzwa kwematanho zvichienderana nenzvimbo dzaunoshanyira kana waunotaura naye (kunyangwe mukati menyika!).
Mavhawero mumutauro wechiPutukezi ^
Iwo mavara A, ini na O anowanzo taurwa senge muchiFrench. Iwe uchawana kududzwa kwemavhawero ese pazasi:
A inonzi "a" mubhanana
E inonzi "é" semameta (kutya)
Ini ndinodanwa sa "ini" mu ilha (chitsuwa)
O inodudzwa seyakavhurika "o", seavó (ambuya), kana seyakavharwa "o", sep porto (chiteshi)
U inonzi "kana" mu rua (mugwagwa)
Y inodanwa kunge chiFrench "y" mu yoga (yoga)
Ive nekuchenjerera, zvakadaro, uchiteverwa naM kana N, mavhawero anowanzo kuve akavhurika (iyo E ichave ichinzi "è" semuenzaniso) uye nasalized. Hapana makuru matambudziko kune vatauri veFrench pano, nekuti isu zvakare tine manzwi akasarudzika mumutauro wedu.
Makonsonendi anoshandura matauriro awo ^
Sezvambotaurwa, makonsonendi B, F, J, K, L, M, N, P, Q, V, W, X naZ anowanzo taurwa sechiFrench. Tsamba H yakanyararawo, senge muchiFrench.
Zvisinei, mamwe mavara erufabheti anogona kuchinja manzwi awo. Iko hakuna akawanda, asi kunyatsovaziva kwakakosha kugona kugona kududzwa kweBrazilian Portuguese. Zvino zvataona tsamba dzese dzisingaratidze chero kunetsekana nemadudziro echiPutukezi, hezvino izvo zvinoda kuedza kushoma.
Bhii C ^
Tsamba C inotevera maitiro akafanana neayo echiFrench:
Ichiteverwa nemavhawero A, O uye U, tsamba C inodudzwa / k / senge mune café (café) kana casa (imba)
Ichiteverwa nemavhawero E neni, tsamba C inodudzwa / s / as in centro (pakati)
Kune zvekare tsamba Ç iyo inodomwa senge muchiFrench, chero mamiriro ezvinhu. Semuyenzaniso: França (France)
Tsamba D ^
Tsamba iyi inodanwa kuti “dj” kana ichiteverwa nebhii I kana tsamba E kana iri panoperera izwi, semuna onde (kupi) kana dia (zuva)
Tsamba G ^
Kungofanana netsamba C, iyi tsamba inozvibata sezviri muchiFrench:
Ichiteverwa nemavhawero A, O uye U, tsamba G inodudzwa / g / senge garrafa (bhodhoro)
Ichiteverwa nemavhawero E neni, tsamba C inodudzwa / Ʒ / senge mugirafa (twiza)
Tsamba R ^
VaPutukezi R (vanobva kuBrazil) vanodudzwa nenzira nhatu dzakasiyana:
Pakutanga kweshoko, rinodanwa senge rapera H, seChirungu kana chiGerman.
Pakati peshoko rinowanzo kuputirwa, senge mune verde (girini)
Kana ichidaidzwa ("RR"), inodomwa seFrench R - carro (mota), kana yakapera H - cachorro (imbwa)
Izvi zvinonzwika - kunze kweiyo French R - hazvisi zvakasikwa kune vatauri veFrench, asi zviri nyore kwazvo kuzviita nekuita zvishoma. Saka, usazeze kudzidzira!
Tsamba S ^
Sezvo muchiFrench, tsamba S inogona kuve nemitinhimira yakasiyana zvichienderana nenzvimbo yayo mushoko:
pakutanga kwezwi kana kana rakapetwa ruviri, rinodudzwa / s /, senge musol (zuva);
pakati pemavhawero maviri, rinodudzwa / z /, semuna casa (imba).
Tsamba T ^
Kazhinji tsamba iyi inodanidzirwa seye French T. Zvisinei, muchiPutukezi cheBrazilian, tsamba T inoteverwa netsamba I kana tsamba E panoperera izwi inonzi "tch", semuna gente (gens).
Mavara anonongedzera ...
MuchiPutukezi, mavhawero anogona kusimbiswa. Iwo maaccents (guva, acute, circumflex, tilde) anogona kuve nemabasa akasiyana zvichienderana neshoko riripo mavari. Ivo anoshandiswa, pakati pezvimwe zvinhu, ku:
kusiyanisa mazwi maviri ane zvakafanana chiperengo: pode (anogona) vs pôde (aigona)
ratidza kuti matauriro aripi kana asingateveri mutemo wezvese: máquina (muchina), útil (inobatsira)
ratidza kududzwa kweboka rema vowels: cão (imbwa), mae (amai)
chinongedzera kudzorwa kwemavhawero maviri pakati pemazwi maviri akateedzana: a + aquela ⇒ àquela (kune iro), a + a ⇒ ku (ku ...)
maka shanduko diki mukutaura: pêlo (vhudzi), pôr (kuisa, kuisa)
Naizvozvo zvakakosha kuti ubate nemusoro kududzwa kwechiPutukezi, pamwe nemiperengo yemazwi kuti udzidze kwazvo.
Guva uye madhaidhi akanyanya mukududzira kwechiPutukezi ^
ChiPutukezi mutauro we tonic, kusiyana neFrench, inova mutauro "unobata". Maaccents anoshandiswa kuratidza zvese panowisirwa izwi rezwi, asiwo kugadzirisa ruzha. Vhawero rine guva kana ruzha runodudzwa pachena. Semuenzaniso, tsamba yekumisikidza O inodudzwa saiyo O mu "apple" (muromo wakashama): avó (ambuya).
Chirevo chemakuva chinowanzo chengeterwa chibvumirano chepangidzo a nemazwi anotanga na-. Semuenzaniso, pachinzvimbo chekunyora aa kana aas, tinonyora à kana às (à la).
Madenderedzwa ecircflex mududziro yechiPutukezi ^
Izwi re circumflex muchiPutukezi rine basa rakafanana nerechiFrench: inoshandura kurira kwevhavha inoitakura. Ruzha saka rwunogadzirwa zvakare nemuromo zvishoma zvakapfigwa.
Iyo tilde mumutauro wechiPutukezi ...
Iyo tilde inoshandiswa nemamwe mavhawero kushandura ruzha rwavo. Vhawero rinoitakura rinobva rava nasalized.
Tsamba yechiPutukezi inosanganisa ^
Kumwe kufanana neFrench, kune mubatanidzwa wemavara maviri kana matatu ane mataurirwo echiPutukezi anochinja. Heano mataurirwo anoitwa aya mapoka etsamba muchiPutukezi:
Mapoka emakonzonendi ^
CH> SemaFrench, mubatanidzwa wemavara C naH unopa ruzha / ʃ / re “chat”, kana chamar (kufona) muchiPutukezi
LH> Iri boka retsamba rinodudzwa / ʎ / kana kufanana na “ill-” muFrench kana Spanish: filho (son)
NH> Iri boka retsamba rinodudzwa / ɲ / kana “gn”: amanhã (mangwana)
ÇC> Iyi tsamba inosanganiswa inodudzwa / ks /
Aya mavara akabatanidzwa anokonzeresa mutsindo wemumhino, kunge maFrench ruzha -on, -an, -in. Kududzwa kwechiPutukezi kwemisindo iyi kwakafanana chaizvo!
>E> iri boka retsamba rinotanga nezwi / a /, uye nekukurumidza rinotsvedza rakananga kuruzha "in": mae (amai)
>O> kusanganiswa kwemavara kunotangawo kubva kurira / a / uye kunotsvedza nekukurumidza zvakanyanya kurira kurira "pa": pão (kurwadziwa)
>E> yakanyanya kunetsa kududza, iyi inotanga nezwi / o / uye nekukurumidza masiraidhi akananga kune "-ing" kurira kwe 'kutenga' semuenzaniso: põe (isa / pisa).
Dzidzira madudziro echiPutukezi ^
Paunenge iwe uchiziva madudziro etsamba, inguva yekudzidzira! Unogona kutanga ku:
Kuti utaure zvakanaka, zorora, tambanudza shaya yako, dzokorora mushure medhiyo mimhanzi yauri kushandisa zvinonzwika, uye wedzeredza kududza kwako. Nekushandisa 5-10 maminetsi pazuva uchiita izvi, iwe uchakurumidza kuona kufambira mberi! Rangarira kuti chinangwa ndechekuzviita unzwisiswe uye kwete kuva nemataurirwo akakwana. Paunonyanya kudzidzira, paunonyanya kutaura, ndipo paunowedzera kukwidziridza matauriro ako futi! Kutaura mune mumwe mutauro (rurimi rwaamai) uye kuva nekadonhwe kadiki kazhinji kunokosheswa nevanhu veko.
Kana iwe wakanakidzwa nechinyorwa ichi uye uchida kudzamisa ruzivo rwako rweBrazilian Portuguese, heano mamwe mazano anogona kukufadza:
Tanga kuvandudza chiPutukezi chako
Iwe unoda kuvandudza yako Portuguese?
Nhau Dzakanaka Kutanga: Tinogona Kubatsira Iwe Yechipiri Nhau Dzakanaka: Unogona Kutanga Iye Zvino Mahara! Shandisa muyedzo wako wepachena, uye unakirwe neiyi nzira inoshanda yekudzidza chiPutukezi kwemazuva gumi nemashanu.
ndima Tranquillus | Juil 13, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Kudzidza kutaura mutauro zvakaringana hakuna kufanana nekudzidzira kuchovha bhasikoro: rinogona kukanganikwa. Saka, iwe unochengeta sei yako nhanho muChirungu iwe usingawanzove nemukana wekudzidzira mutauro waShakespeare? Kunyangwe uchigara wega pachitsuwa chegwenga kana muguta guru, taisa pamwechete rondedzero pfupi yenzira dzakapfava dzekusvika padanho rakanaka muChirungu… pasina kuedza kukuru.
Dzese idzi matipi dzinofungidzira kuti wakakwanisa kutaura Chirungu zvakatsetseka pane imwe nguva muhupenyu hwako. Ndokureva, kugadzikana zvakakwana kuti unzwisise mutauri weChirungu uye nekumupindura usingatsvage mazwi ako panguva yehurukuro, ingave hupenyu hwezuva nezuva kana chidzidzo chakaomarara zvine mutsindo. Kana iwe uchikwanisa kunyora yako biography muChirungu, unogona kutaura Chirungu zvakatsetseka. Uye izvi, kunyangwe iwe usingakwanise kupfuudza iyo recipe ratatouille nekuti hauzive mazita echiChirungu ezvose zvinoshandiswa (eggplant, zucchini, madomasi, gariki, green pepper, tsvuku mhiripiri, mhiripiri, munyu, 'bouquet garni').
Hechino chingangoita chakazara rondedzero yedzese nzira dzinogoneka dzekuchengetedza huwandu hwako hweChirungu, kana kunyatso kuwedzera izwi rako kana ukaita nhamburiko yekutarisa muduramanzwi remashoko nemadimikira ausinganzwisise.
1. Nyorera kumagazini / tsamba yemashoko / pepanhau muChirungu
Kana vachipinda muzvidzidzo zvavo, vadzidzi veFrance vanowanzo kurairwa kunyorera kumagazini yeTime. Ipfungwa yakanaka; asi ivo vanowanzo tendera kurega kuverenga vhiki nevhiki nekuda kwekushaya nguva, kana kushomeka kwechido. Kunyanya sezvo Nguva dzimwe nguva inogona kunge yakaoma zvikuru, kunyange yakaoma kuverenga.
Saka nyorera kumagazini, pepanhau kana kunyange nyore tsamba rinokufadza chaizvo - chingave chikafu, mitambo yemavhidhiyo, gadheni, mari kana cryptocurrency. Kwete chete iwe unozochengetedza yako nhanho yeChirungu pasina yakawandisa kuyedza, asi pamusoro pezvo, iwe unozounganidza tekinoroji mazwi anozobatsira muhupenyu hwako hwepamoyo
2. Shanda nevatauri veChirungu zvakanyanya sezvinobvira
Zvakareruka kutaura pane kuzviita, kuva padhuze nevatauri veChirungu hapana mubvunzo ndiyo nzira yakanakisa yekuchengetedza yako chikamu cheChirungu. Iwe unogona kusainira kusangana, kugamuchira vausingazive zvachose kuburikidza neCouchsurfing, uve wekumirira kofi munzvimbo yevashanyi, nezvimwe.
3. Kufamba / kubuda / kutora WHV munyika inotaura Chirungu
Avo vari pasi pemakumi matatu nemashanu vanogona kubatsirwa neiyo Working Holiday Chirongwa (WHP) - pasuru yezvibvumirano zvinovatendera kuti vaende kunze kwenyika kuti vafambe nekushanda panguva imwe chete. MaFrancophones anogona saka kushandisa gore rimwe kana maviri mumakore gumi nematanhatu akasiyana: Australia, Canada, New Zealand, nezvimwe.
4. Nyora dhayari rako muChirungu
Ivo vanochengeta diary (kana dhayari) vanongofanira kunyora zvinyorwa zvavo muChirungu kuchengetedza yavo yeChirungu, kunyangwe iri peji rimwe chete pamwedzi.
5. Nyora memos, zvinyorwa zvekutenga uye zvekuita-zvinyorwa muChirungu
Kufanana nezano rapfuura, nzira iri nyore kwazvo yekuchengetedza yako yeChirungu kunyora pasi zvese zvidiki zvezuva nezuva mumutauro waShakespeare: zvinyorwa zvekutenga, zveku-ita zvinyorwa, zveku-ita zvinyorwa, zveku-ita zvinyorwa. '' Zvinhu zvekutora. newe paweekend kana nzendo, nezvimwe. Nekuda kwehunyengeri uhu, hauchazofaniri kunetseka nezve kuendesa iyo ratatouille recipe kune nyika yese.
6. Tarisa mafirimu uye akateedzana muChirungu kuti uchengetedze yako chikamu cheChirungu
Kuona mabhaisikopo kana akateedzana mushanduro yavo yekutanga ndiyo imwe yenzira dzakajairika dzekuchengeta rako reChirungu.
7. Verenga zvinyorwa uye zvinyorwa muChirungu
Heano mamwe mabhuku atinokurudzira kuti uverenge mu2019.
8. Tarisa nzvimbo dzekutaura dzeChirungu mazuva ese kuti uchengetedze huwandu hwako hweChirungu
Panzvimbo pekuenda kunoverenga Le Monde mazuva ese, wadii wafananidza kuverenga kwako neyeye makuru emitauro yeChirungu senge New York Times, Politico kana Guardian? Kwete chete iwe unozounganidza mazwi uye madimikira, asi pamusoro pezvose, iwe uchave neakasiyana maonero ekuona panhau pane iyo Franco-French kutarisisa kweFrance nhepfenyuro.
9. Teerera kune podcast kana audiobooks muChirungu
Podcasts ndidzo hasha, uye muchinyorwa chino tinokuunzira runyorwa rweakanakisa maPodcast ekuteerera muChirungu.
10. Isa foni yako / komputa / Facebook account muChirungu
Kuchinja mutauro wefoni yako, komputa yako, yako Facebook account, kana kutamba mitambo yemavhidhiyo muChirungu, zvinokutendera kuti ugare uchitaurirana neChirungu nemutengo wakaderera. Iyi hunyengeri, yega, zvakadaro haina kukwana zvakakwana kuchengetedza huwandu hwayo.
11. Teerera kunhepfenyuro neChirungu
Ndokumbira utarise: izvi hazvisi zvekuteerera podcast. Kuteerera mawairesi anotaura Chirungu, rarama, paInternet kana pawairesi yako, inzira inoshanda zvakanyanya yekuchengetedza mwero weChirungu zvese zviri zviviri (sezvo uchigona kuita zvimwe zvinhu panguva imwe chete) uye nekushingairira (kana uri kuisa pfungwa shoma kuteerera kune zviri kutaurwa pane kuva neredhiyo senge yakapfava kumashure kurira). Kana iwe usinganzwisise zvese (kana kunyangwe zvakawanda pakutanga), izvo zvakajairika. Kwemwedzi yakati wandei, iwe unozoona kuti urikuita kushoma uye kushoma kuedza kunzwisisa, uye kuti iro rako reChirungu rinotowedzera zvishoma nezvishoma!
BBC ne Voice of America ndidzo nhepfenyuro dzinonyanya kuzivikanwa, asi kune mamwe mamirioni.
12. Nyorera kuYouTube chiteshi / FB mapeji / Instagram & Twitter maakaunzi
Pamusoro penyaya iyi, unogona kuverenga chinyorwa chedu pane akanakisa YouTube chiteshi.
13. Tsvaga anotaura Chirungu
Kutsvaga penpal kana munyori anotaura Chirungu izvozvi zvave nyore neinternet. Kune akati wandei masayiti akakosha sePenPal World kana Mylanguageexchange - asi kana iwe uchida penpal "chaiyo", ndiko kuti mumwe munhu wekuchinjana tsamba dzemapepa dzechokwadi dzakatumirwa nepositi, iwe unofanirwa kutendeukira kusangano iri International Pen Shamwari.
14. Gamuchira vatorwa neCouchsurfing
Nheyo yeCouchsurfing iri nyore: gamuchira vese vausingazive pamba, kwenguva yakareba sezvaunoda. Uku kushanya inguva zhinji mukana wekuchinjana kudya, chiitiko, kushanya, chinguva nevanhu vanobva kumativi ese epasi.
15. Iva netsika yekudzidza mazwi gumi emazwi pazuva kuti uchengetedze mwero weChirungu
Tsika inoda kurairirwa kukuru, asi iyo inobvumidza zvese zviri zviviri kuchengetedza mwero weChirungu sekuwedzeredza ruzivo rwemumwe mutauro.
16. Dzidza nhetembo vhiki imwe neimwe
SaFrançois Mitterand, kudzidza nhetembo nemoyo vhiki rega rega chiitiko chakanakisa chekushandisa ndangariro yako. Kuzviita muChirungu idambudziko rinotonyanya kunakidza, sezvo mavhesi aunodzidza achizoita shamwari dzakanaka dzekufungisisa.
17. Verenga mabhuku ane mitauro miviri
Kuverenga mabhuku muChirungu inzira yakanaka yekuchengetedza yako huwandu hweChirungu. Asi kuverenga mabhuku akaburitswa mumitauro miviri - zviri nani, nekuti kushandura kunokutendera kuti ushandise kunzwisisa kwako mutauro.
18. Nyora nyaya pfupi dzevana kana nyaya pfupi muchirungu
Kana iwe uine mweya wemunyori ari kusimukira, kunyora nyaya pfupi muChirungu zvese zvinonakidza uye inzira yakanaka yekuvandudza yako Chirungu. Usave unozvifunga iwe pamusoro pehunhu hwehunhu: chinhu chakakosha kugadzira nyaya, kunyangwe kana dziri kure kana kuti dzisina kufarira mumaziso ako!
19. Kubika muChirungu
Kune avo vane mweya wemubiki, kuzviwana nekuzvinyudza mumabhuku eresipi akanyorwa muChirungu zvinoshanda zvine mutsindo mukuchengetedza mwero weChirungu.
20. Imba muChirungu
Chekupedzisira, rairo riri nyore kushandisa kuti uchengetedze yako yeChirungu chikamu kuimba. Asi chenjera: hausi chete mubvunzo wekusunda rwiyo mushower, asi wekuteerera kumazwi, kuanzwisisa, kuadudzira, kuasanganisa. Nekuisa mumusoro nziyo, kudziimba nguva dzose, nekunzwisiswa kwakajeka kwemagwaro akanyorwa nevanyori, hauzonetseki kuchengeta Chirungu chako padanho rakanaka.
Maitiro ekunyora yako CV zvakanaka muChirungu?
ndima Tranquillus | Juil 5, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Maitiro ekunyora yako CV zvakanaka muChirungu? Nekutanga kwegore rechikoro uye kutanga kwegore idzva, vadzidzi vazhinji vari kutotsvaga internship kunze kwenyika, kana mabasa asinganzwisisike kuti vawane mari mukati megore re gap kana gore reErasmus.
Heano mamwe asingasviki gumi nemana matipi ayo achakubatsira iwe kunyora yakanakisa CV inogoneka muChirungu. Tichatanga kuenzanisa misiyano mikuru mitanhatu inogona kuve iri pakati peFrench neChirungu maCV, topedzisa ne6 matipi akajairika anoshanda kune ese maviri mamodheru.
Nzira yekunyora yakanaka CV muChirungu?
Iwo matanhatu makuru mutsauko pakati peFrench CV uye yeChirungu CV
1. "Pfupiso" yako
Uyu ndiwo musiyano mukuru pakati peFrance CV neChirungu CV: pfupiso yeako musarudzo chimiro, mundima yekusuma, pamusoro peCV yako.
Ichi chikamu chakanyanya kukosha cheCV yako muChirungu, nekuti ndicho chekutanga (uye dzimwe nguva, ndicho chega) chinhu icho murengi achaverenga. Iwe unofanirwa kugona kumira, kuratidza kurudziro yako, uzviratidze pabasa uye nechikwata, uye ratidza kugona kwako ... Zvese mumitauro miviri kana mitatu.
Muenzaniso webasa rinopihwa muChirungu:
Ane ruzivo Project Manager ane yakakura IT ruzivo. Unyanzvi hunosanganisira komputa network, kufunga kwekuongorora uye kugadzirisa matambudziko kugadzirisa. Inokwanisa kuisa pfungwa dzevashandi kune IT kuvandudza ruzivo rwevashandisi kune vatengi, vashandi uye manejimendi.
2. Kukosha kwehunyanzvi uye hwega ruzivo
Kusiyana neFrance, nyika dzeAnglo-Saxon dzinonyanya kufarira ruzivo nehunyanzvi, pane madhigirii eyunivhesiti nemazita.
Chiitiko chehunyanzvi saka chichava chikamu chikuru cheCV yako, kwaunonyatso tsanangura basa rako mune inoratidzika, uye inogara iri fomati. Chikamu ichi chinofanira kusanganisira zvinotevera:
Zita rekambani yawakashandira Iyo nzvimbo yawakashandira Mazuva awakashandira Basa rawaibata, pamwe chete nezita repamutemo rerondedzero yebasa Uye, zvakanyanya kukosha, runyorwa rune zviito zviito uye data rakakosha, zvichiratidza nyanzvi zvibudiriro zvine chekuita nechikumbiro chako
Nekudaro, kuti ubude pachena, iwe unogona kuisa chaiyo chaiyo data yeako ehunyanzvi mhedzisiro: 83% kuwedzera mukutengesa iwe pawaive uri mutengesi, kunyora kwepepa chena, nezvimwe. Ive nekuchengera kuti usakanganise zvakavanzika zvehunyanzvi izvo iwe zvaungave wakave wakazviisa pasi pebasa rako rekare.
3. Unyanzvi hunyoro
Kumwe kusarudzika kweCVs muChirungu ndiko kukosha kwehunyanzvi hunyanzvi, izvo zviri izvo hunhu hwevanhu hunobatsira mumabasa akasiyana siyana, sekushanduka, kuremekedza, kugona kutaura, nezvimwe.
Yambiro: hazvina kukwana kuisa "Hutungamiri" kune uyo anotora kuti akutore semutungamiri weboka anogona. Hunyanzvi hwese hwaunoisa muCV yako hunofanirwa kuve hunoratidzwa neyakaitika uye inopupurirwa chiitiko! Kana iwe uchiti iwe unokwanisa kugona, mukana uripo, panguva yekubvunzurudzwa, uyo anotora anokukumbira kuti utaure chiitiko chawaive uchigadzira.
Pakati peakakosha hunyanzvi hunyanzvi ndeaya:
KutauriranaNguva YekutongaKusarudzaKuchinjikaKuzvishingisaKukurudziraVatungamiririResponsibilityTeamworkProblem Kugadzirisa / Kugadzira kufungaKukwanisa Kushanda Mukumanikidzwa
Panyaya iyi, ona matipi edu matatu ekutaura Chirungu kubasa!
4. Madhigirii haana kukosha kudaro
Kusiyana neFrance CV, Chirungu CV ichaisa iyo "Dzidzo" chikamu chekupedzisira, pazasi chaipo peCV. Uye, kazhinji, mukwikwidzi anozogutsikana kuisa diploma yake ichangoburwa, kana inonyanya kukosha. Saka ingo isa yunivhesiti iyo iwe yawakapedza kudzidza, pamwe nezita reyako yepamusoro degree.
Hapana chikonzero chekuisa baccalaureate yako, rezinesi rako kana uine degree raTenzi, wako tenzi kana iwe uine doctorate, nezvimwe. Kunze kwekunge zvakakosha, kana semuenzaniso iwe wakadzidziswa mumatanho maviri ekuwedzera.
5. MuUnited States, kutumira pikicha hakukurudzirwe.
Kazhinji, hazvisi zvakajairika kuwana mapasipoti mapikicha paCVs muChirungu. Nekudaro, izvi zvinogona kunge zvichiri kukodzera kumabasa senge wehita kana muenzi.
6. Mazano ehunyanzvi
Chekupedzisira, kumwe kusarudzika kweCVs muChirungu, dzimwe nguva, kuvepo kwemazano ehunyanzvi. Chokwadi, muchikamu che "Chiitiko", zvingave zvakakosha kuisa zita, email kero, uye nhamba yefoni yemunhu anozobvuma kuratidza hunyanzvi hwako uye hunhu hwako.
Angave aimbova mukuru wako, aimbove maneja, purofesa weyunivhesiti, mudzidzisi wako wezvemitambo, chero munhu anoenderana nebasa rako remangwana.
Usakanganwa kuzivisa vanhu ava kuti iwe waisa zita ravo uye yavo yekuonana paCV yako, zvikasadaro unozopedzisira uine zvisingashamisi kushamisika ...
Izvo hazvichinje: 8 matipi ekunyora yako CV muChirungu
Chii chisiri kuchinja? Zvimwe zvese! Heano mamwe mazano akajairika ekunyorera yakanaka CV muChirungu kana French:
Shandisa font iri nyore kuverenga, haina kudhara, uye haiendeki pazasi pe11pt.Ika mumamarina einenge sentimita imwe.Ita chokwadi chekuisa nzvimbo chena yakakwana pakati pezvikamu zvakasiyana zveCV yako. CV ine zvigadzirwa zvemazuva ano kana zvishongedzo. Iko kushandiswa kwemavara kunogoneka, asi kuichengeta yakadzikama.Kana iwe ukatumira mafomu naLa Poste kana kana iwe ukapa CV yako, ita shuwa kuti uprinte papepa rakanaka, ine grammage ye80g / m². Shandisa zvakare inki yemhando yepamusoro, kunyangwe kana zvichireva kuenda kune nyanzvi yekuprinda Kunze kwekunge wakumbirwa zvakanyanya, usatumira CV yako muPDF fomati. Vashandisi vanowanzo shandisa software kuongorora zvakare, uye iyo software haigone kuverenga maPDF zvakanaka. Kunze kwekunge iwe uri mune zvedzidzo kana zvekurapa tsvagiridzo, yako resume haifanire kunge yakareba kupfuura rimwe kana maviri mapeji. Kunze kwekunge iwe uchinyorera chinzvimbo chevakuru manejimendi, namatira kune peji rimwe chete kuti utangezve. Izvo zvakakosha kuratidza mumwe mweya we synthesis uye kugona.
Mira sei kududzira mumusoro wako? - Kufunga mune mumwe mutauro [VIDEO]
ndima Tranquillus | June 30, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Kufunga mune mumwe mutauro kunze kwerumwe rurimi rwaamai idambudziko kana uchidzidza mumwe mutauro. Kana usati wambovepo, iwe uchaona kuti iwe uchazoda kududzira zvese zviri mumusoro mako, kubva kune yako mutauro mutauro kune mutauro wako wekuzvarwa. Inogona kukurumidza kutora nguva, uye isinganyatso kushanda! Saka ungadzivise sei kuita izvozvo wobva wawana hunyoro uye chivimbo? Abbe inogovera dzimwe nzira dzinoshanda dzekukubatsira iwe kutanga kufunga mumutauro wako wekutarisa. Iye zvakare achakupa matipi ekuti mira sei kushandura mumusoro wako.
Mufambiro wedu kumutauro wechiArabic nemitauro yawo
ndima Tranquillus | Apr 12, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Kana tichitaura mitauro yeramangwana, tinomutsa Chinese, dzimwe nguva Russian, Spanish zvakare. Zvakawanda zvisingawanzo chiArabic, mutauro unowanzo kanganwika. Haasi iye, zvakadaro, anorwira zvakakomba zita racho? Ndiwo mumwe wemitauro mishanu inotaurwa kwazvo pasi. Mutauro wesainzi, hunyanzvi, budiriro uye chinamato, chiArabic chakakanganisa zvikuru tsika dzenyika. Gore negore, yakatendeka kutsika dzayo, mutauro wechiArabhu unoramba uchifamba, uchizvipfumisa uye kunakidza. Pakati pechiArabic chaicho, madimikira asingaverengeke nemavara aro anozivikanwa nyore nyore, ungatsanangure sei musimboti wemutauro usinganzwisisike uyu? Babbel anokuisa iwe munzira!
Ndekupi mutauro wechiArabic unotaurwa munyika?
ChiArabic ndiyo mutauro wepamutemo wenyika makumi maviri nemana uye mumwe wemitauro mitanhatu yepamutemo yeUnited Nations. Aya ndiwo matunhu makumi maviri nemaviri eArab League, pamwe neEritrea neChad. Hafu yenyika idzi dzinotaura chiArabic dziri muAfrica (Algeria, Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Libya, Morocco, Mauritania, Somalia, Sudan, Chad neTunisia). Iyo imwe hafu iri muAsia (Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Syria ne Yemen).
ChiArabic, Turkish, Persian ... ngatitorei stock! Ruzhinji rwevatauri vechiArabic vari maMuslim - uye chiArabic chiri mutauro weKorani - nyonganiso yakajairika ndeyekuvhiringidza mutauro weArabhu neIslam. Nyika hombe yeMuslim mupasi rose, zvisinei, haisi kutaura chiArabic sezvo iri Indonesia. ChiArabic mutauro weSemite. Kupesana nekutenda kwakakurumbira, haana hukama hwemhuri neTurkey - inova yeboka remitauro yeAltaic. Persian kana Farsi, mutauro wekutanga weIran, hauna hukama neArabic. Icho chi Indo-European mutauro… kunge French! Saizvozvowo, muAfghanistan, iwo maviri mazhinji mitauro mitauro yeIran: Dari uye Pashto. Iyi tsika yemutauro weArabic iri mune vashoma imomo, kumashure kweUzbek kana Turkmen. Iyo yakachengeterwa chitendero nekutengeserana kwekunze neMiddle East.
PaBabbel, isu tave kujaira kudzikisira zvinyorwa zvekunyora. Iyo Cyrillic alfabheti haidi anopfuura mazuva maviri ekudzidza. Yedu Alphabet World Tour yatotitora kubva kuCaucasus kuenda kuKorea Peninsula. Kana ari mavara echiArabic… haisi arufabheti mupfungwa yekuti tinoinzwisisa pamavara echiLatin! Inodaidzwa kuti abjad kana mavara echidimbu, arufabheti yeArabic inongonyora makonsonendi. Izvo zvakanyorwa uye kuverenga kubva kurudyi kuenda kuruboshwe uye ine makumi maviri nesere mavara.
Iyi nzira yekunyora inogona kuwanikwa mune mimwe mitauro, kunyanya Persian, Kurdish uye Urdu. Kubva gore ra1000, rave richishandiswa zvakare neUyghurs. Kusvikira 1928, yakashanda sechinyorwa muTurkey icho chakazoshandisa vhezheni yechiLatin.
Literal Arabic uye Dialectical Arabic
ChiArabic zvirokwazvo muenzaniso wakanakisa wediglossia. Diglossia ndeyekuti mutauro wakakamurwa kuita akati wandei marudzi ematunhu, ayo dzimwe nguva asinganzwisisike pakati pawo. ChiArabic, semutauro, inogona kuratidza zvinhu zviviri zvakasiyana: chiArabic chaicho kune rimwe divi, mutauro wechiArabic kuno rumwe.
ChiArabic chiArabic izita rakapihwa mutauro wakatarwa. Mutauro wekutonga uye wezvematongerwo enyika, ndizvo zvinozivikanwa semutauro wepamutemo wenyika dzinotaura chiArabic. Izvo zvakare izvo izvo izvo munhu anowana muKoran, mune vezvenhau uye mune chaiyo girama. Inotonga mukukurukurirana kwakanyorwa uye kwakarongeka, muchitendero uye mukuchinjana kwenyika. Asi muchokwadi, hapana munhu ane echinyakare chiArabic serurimi rwaamai. Dialectal Arabic mutauro unoshandiswa nemuromo muhupenyu hwezuva nezuva. Zvinotora mafomu akasiyana kwazvo kubva kudunhu kuenda kune rimwe.
Nei kwakadaro diglossia? Icho chibereko chezvakaitika kare, zvemagariro uye zvematongerwo enyika. Kufanana nemitauro yese inorarama, chiArabic chinochinja nekufamba kwenguva. Mutauro wenhetembo wakave mutauro wechitendero kubva muzana ramakore rechinomwe zvichienda mberi, yakakunda nzvimbo yakakura ine pesvedzero dzakasiyana. Iwo madimikira ekare, ayo asina kunyangarika zvachose, akagadziriswa kuti asangane neArabic. Coptic muEjipitori, Berber muMaghreb, Aramaic muSyria ... Nhoroondo yemutauro wechiArabic inhoroondo yekutama uye kusimudzira kwetsika. Ngatitarisei pamatauro makuru echiArabic.
Ndeapi makuru madudziro echiArabic?
Misiyano yemitauro yeArabic inoitwa pamatanho akati wandei. Nyanzvi dzakatanga kufarira nzira nematunhu. Ikoko kwaizove neArabhiya yekuMadokero zvichipesana neEastern Arab. Asi kunyangwe mukati mematunhu ayo, pane misiyano mizhinji. Kusvika padanho rekuti dzimwe nguva vasiye zvikamu muzvikamu zvemitauro vachida izwi rekuti mitauro.
Western Arabhu uye Eastern Arabhu
Western Arabhu, kana Maghrebian ChiArabic, inoratidzira mitauro yemhando iripo - muchidimbu alfabheti yenzvimbo - muAlgeria, Libya, Morocco, Mauritania neTunisia.
Nekubvisa, dzimwe dzese dzinotaura chiArabic dzakasungirirwa kuEast Arabic. Tinogona kusiyanisa pakati penzvimbo ina dzemitauro inova:
- ChiIjipita chiArabic;
- Mesopotamian Arabic, kunyanya muIraq;
- Levantine Arabic, muSyria, Lebanon, Palestine neJoridhani;
- Peninsular Arabic, yakajairika kune dzimwe nyika dzinotaura chiArabic dzeArabia Peninsula.
ChiArabic dialect: mimwe mienzaniso
MuAlgeria Arabic, rurimi rwaamai rwevanhu vanosvika mamirioni makumi mana vatauri, mamwe mavhawero anowanzo nyangarika. Semuenzaniso, izwi سماء (s'ama, sky) rinodanwa s'ma. Zvakare, Syrian Arabic inoramba yakatendeka kune chiArabic chaicho mukududzira. Mumwe muenzaniso: كيفاش؟ (kifach, sei?), وقتاش؟ (weqtach, rinhi?) uye maitiro ekuwedzera -ach kumagumo emashoko ekubvunzurudza muAlgeria Arabic neMoroccan Arabic. MuRebhanoni kana muEjipitori, iyo yekumashure inonzi kif.
Chii chinonzi arabizi?
Uchapupu hwekuti shanduko yemutauro weArabic haisati yapera, mutauro mutsva wakaonekwa muma1990. Icho chiArabic, chinogona kunzwisiswa sekubatanidzwa kweArabic neChirungu (inglizi muchiArabic) seFrenglish, kana sechibvumirano che mazwi echiArabic uye ari nyore. Kushaikwa kwemakirabhu echiArabic pamafoni ekutanga zvakatungamira kune mavara asipo akatsiviwa nenhamba. Tsamba "ء" inova 2, iyo "ع" inova 3 kana kunyangwe "ح" inova 7. Chinhu chinokombamira kutsakatika nhasi asi icho chichiri kuwanikwa pamasocial network.
Nenzira, zvinorevei kuva "mitauro miviri"?
ndima Tranquillus | Feb 16, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Wanga uchiziva here kuti ingangoita hafu yevagari vepasi vanozvitora sevanotaura mitauro miviri? Iyi nhamba, iyo ingaite senge inoshamisira pakuiona kwekutanga, inosimbiswa mukutsvagisa kwemitauro miviri kwakaitwa naEllen Bialystok, chiremba wepfungwa uye purofesa weCanada kuYunivhesiti yeYork muToronto.
Mushure mekugashira degree rake rezvechiremba muna 1976, aine hunyanzvi hwekuziva uye kusimudzira mutauro muvana, tsvagiridzo yake yakazotarisa pamitauro miviri, kubva paudiki kusvika kumazera epamberi. Ndiine mubvunzo wepakati: kuita mitauro miviri kunokanganisa maitiro ekuziva here? Kana hongu, sei? Iyi mimwechete mhedzisiro uye / kana mhedzisiro zvichienderana nekuti huropi hwemwana here kana hwemunhu mukuru? Vana vanova sei vanotaura mitauro miviri?
Kana iwe urikudzidza mutauro neBabbel, iwe zvechokwadi unorota yekukwanisa kusvetuka zvese zvako zvidzidzo uye, nekukanda kweminwe yako, kuve unonzwisisika mitauro miviri. Nehurombo, izvi hazvigoneke!
Kuti tiregererwe, tiri kuzokupa mune ino chinyorwa makiyi ekuti unzwisise zvinorehwa nekuva nemitauro miviri, ndedzipi mhando dzakasiyana dzemitauro miviri uye, pamwe, zvinokukurudzira kuti uwedzere kugona kwekudzidza kwako mutauro.
Ndeapi marudzi akasiyana emitauro miviri?
Kuva nemitauro miviri kunorevei chaizvo? Munhu anganzi anotaura mitauro miviri kana achigona kutaura nemitauro miviri, zvese zviri zviviri muchimiro chinoshanda (kutaura, kunyora) uye muchimiro chekungoita (kuteerera, kuverenga). Nekudaro, zvinopesana nekutenda kwakakurumbira, munhu anotaura mitauro miviri hazvireve kuti anogona mumitauro miviri. Izvi zvinowanzoitika kune vana vanotaura mitauro miviri kubva kune vanobva kune dzimwe nyika vanozoshandisa zvirinani mutauro unoshandiswa pakudzidza kwavo kutaura nezvezvinhu zvisinganzwisisike (hunyanzvi, huzivi, nezvimwewo).
Zvakare, kunyange paine mhando dzakasiyana dzemitauro miviri, havafanirwe kuvhiringidzwa nekugona kutaura mutauro "zvakatsetseka". Kudzidza kutaura zvakaringana Chirungu neBabbel zvinogoneka nyore: zvinongoda kugona kutaura mumutauro uyu, kunyangwe uine zvikanganiso zvishoma.
Nzira shanu dzekutaura mitauro miviri ...
Zera rekutora mutauro rinoita chinzvimbo chekutarisa mumitauro miviri yemunhu. Kune mhando shanu dzemitauro miviri:
Panguva imwechete yekutanga mitauro miviri: kudzidza mitauro miviri kubva pakuberekwa. Izvi ndizvo zvinoitika kuvanhu vane vabereki vaviri vane mitauro miviri yeamai yakasiyana.
Kwekutanga akateedzana mitauro miviri: kudzidza zvishoma mutauro kubva pakuzvarwa, usati wadzidza mutauro wechipiri kubva paudiki hudiki. Iyi ndiyo nyaya yevana vari, semuenzaniso, vanochengetwa nanny vachitaura mumwe mutauro.
Late bilingualism: kudzidza mutauro wechipiri kubva pamakore matanhatu, kubva mururimi rwaamai.
Kuwedzera bilingualism: kubudirira kwemitauro miviri kuburikidza nemitauro yemitauro.
Kubvisa mitauro miviri: kudzidza mutauro wechipiri kukuvadza wekutanga.
... kwemadhigirii mashanu emitauro miviri
Pamwe pamwe neiyi nzira shanu yekuita mitauro miviri, pane madhigirii mashanu ekugona kwemitauro miviri:
Bilingualism "yechokwadi": kugona kwakakwana kwemitauro yese, kugona kuzviratidza mune zvese zvinyorwa, pane zvese zvidzidzo.
"Semi-mitauro": huwandu hweruzivo rwemitauro yese yakaenzana, kunyangwe kana pasina kana mitauro yakanyatsoziva. Izvi semuenzaniso nyaya yevana vanodzidza mitauro miviri panguva imwe chete.
"Kuenzana": kutsetseka mumitauro miviri nenzira imwechete, pasina kusvika padanho remutauri wechizvarwa.
Diglossia: kushandiswa kwemutauro wega wega mune yakasarudzika mamiriro. MuParaguay, zvakajairika kusangana nevanhu vanotaura zvese Guarani (inoshandiswa muhupenyu hwezuva nezuva, nemhuri, shamwari, vatinoshanda navo ...) uye chiCastilian (chinoshandiswa kuchikoro, muhukama hwehutungamiriri, muhurongwa hwepamutemo…). Mitauro yematunhu yakadai seOccitan, Basque, kana Breton inogona zvakare kuuya pasi pe diglossia.
Passive bilingualism: kunzwisisa mutauro usingakwanise kuutaurisa. Izvi ndizvo zvinoitika nemunyori wemitsara iyi, anonyatsokwanisa kunzwisisa Khmer nemuromo asingakwanise kuitaura, kuverenga kana kunyora.
Mhedzisiro yemitauro miviri pahuropi
Kusvikira pakati pezana ramakore rechimakumi maviri, mutauro wemitauro miviri waipomerwa zvakaipa zvese: zvine chekuita nekuvhiringidzika kwevana, kunonoka kukura kwekuziva, kudzivirira kubudirira muzvidzidzo nekusimudzira munharaunda ...
Verenga paBabbel Magazine: sei mitauro miviri yakada kundipengesa!
Nhasi, munhu wese anobvuma kuti mitauro miviri haigadzise zvakaipa. Zvichienderana kunyanya nekutsvaga kwaEllen Bialystok, tinogona kusiyanisa matatu makuru mhedzisiro mhedzisiro yemitauro miviri pahuropi.
Pane mibairo mikuru mitatu yekugona kutaura mitauro miviri.
- Kunonoka zviratidzo zvekuora mwoyo uye chirwere cheAlzheimer
Imwe yeongororo yaEllen Bialystok yakatarisa vanhu mazana mana nevana vane chirwere cheAlzheimer, vese vaive nezviratidzo zvakafanana panguva yekuongororwa. Hafu yemuyenzaniso vaive vanhu vaitaura mitauro miviri, vachinge vanyatsotaura mitauro miviri nguva nenguva muhupenyu hwavo.
Kutsvagurudza kwake kwakaratidza kuti varwere vanotaura mitauro miviri vakatanga kuona zviratidzo zvechirwere makore mana kusvika mashanu gare gare kupfuura monolinguals. Anogumisa kuti kutaura mitauro miviri hakudziviriri chirwere cheAlzheimer, asi kunopa zororo.
Pamwe chete, muna 2013 muongorori weIndia Suvarna Alladi akaburitsa chidzidzo chinosanganisira vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nesere, zvichiratidza mhedzisiro yakafanana.
Tsananguro yacho ndeyekuti kana tikura, mitauro miviri yaizobatsira kuchengetedza grey uye chena nyaya, yakakosha pakukwanisa kwedu kugona kuziva. Uye zvakare, kudzidza mutauro, kunyangwe pazera rakura, kwaizowedzera grey nyaya. Saka hazvina kana kunonoka kutanga kudzidza mutauro neBabbel!
- Uropi hunoshanda
Kuva mitauro miviri kunowanzo tsanangurwa sekungogara uchingogunun'una mitauro miviri. Kana uchiona mota, mitauro miviri Franco-Spanish inozofunga nezve ese izwi izwi mota uye izwi carro. Kana iye aine mumwe French, achataura nezve mota, achivhiringidza iro izwi carro, iro zvakadaro rinogara kumwe kumashure kwemusoro wake.
Tsvagurudzo yaEllen Bialystok yakaratidza kuti "dunhu rakapetwa", nekunzwa kudaidzwa, inosimbisa hurongwa hwe "Executive control" hwehuropi, sekunge kuti bilingualism "mhasuru" chikamu chemuviri wedu.
Nenzira imwecheteyo iyo mutambi anodzidzira achabudirira mukusimudza huremu hunorema kupfuura munhu akajairwa, mabilingual saka akadzidziswa zvirinani kuita mamwe mabasa ekuziva: kuita zvinhu zvakati panguva imwe chete, kugadzirisa kusawirirana, kufamba nekukurumidza. imwe, inhibit chiito.
- Kuva nemitauro miviri kunogadzira kugona
Ongororo dzinoverengeka zvakare dzinoti huropi hwevanhu vanotaura mitauro miviri vane hunyanzvi kupfuura hwevanhu vasina mutauro. Chidzidzo chekutanga pamusoro penyaya iyi chakaitwa muQuebec muna 1962, ndokupedzisa kuti kutaura mitauro miviri kwaizopa mukana chaiwo padanho rekuziva, kunyanya maererano neyakavhurika pfungwa, kugadzira, uye kushanduka. Maitiro anoshandiswa muzvidzidzo izvi anogara achikwikwidzwa: samuenzaniso idiki, kusarudzika kwekunze, nharaunda yemagariro, nezvimwe
Chekupedzisira, pane mhedzisiro isiri yakanaka kana yakaipa, asi isina kwayakarerekera: mabilingual anotora nguva yakareba kusarudza mazwi avo, uye angave aine mashoma mazwi. Kana, semuenzaniso, munhu anotaura mitauro miviri akabvunzwa kutumidza michero yakawanda sezvinobvira, zvinotora nguva yakareba kuti usvike panhamba yemichero inotaurwa nemurume mumwechete.
Uku kunonoka hakusi iko pachako kwakaipa. Iyo inogona kutonzwisiswa senge imwe nzira yehungwaru, iko kudzidza mutauro kungave kusiri kujairika!
Nei uchifanira kudzidza Chinese?
ndima Tranquillus | Feb 3, 2021 | Pamusoro pewebhu |
Uine vanopfuura mamirioni mazana masere nemakumi masere vatauri munyika, iwe unoti iwe pachako: wadii mumwezve? Iwe unoda kutanga kudzidza Chinese? Tinokupa pano zvese zvikonzero zvekudzidza Mandarin Chinese, uye ese edu mazano akanaka kuti utange iyi refu uye yakanaka kudzidza. Sei, sei, uye kwenguva yakareba sei, isu tichitsanangura zvese kwauri.
Chii chauchawana mune ino chinyorwa?
Nei uchifanira kudzidza chiChinese nhasi?
Saka pachokwadi, chiMandarin Chinese hausi mutauro unozivikanwa seunyore kudzidza. Iyo inotomiririra gehena rechinetso kune vekuMadokero vanoda kutanga. Gehena redambudziko iro richiri kupa zvido zvakawanda ... Kune avo vanoda zvinetswa, chatova chikonzero chakanaka chekuchidzidza, kune vamwe pano zvimwe zvikonzero zvakanaka zvekudzidza Mandarin nhasi.
Ndiwo mutauro wekutanga kutaurwa pasi pano ...
Vanopfuura mamirioni mazana masere nemakumi matanhatu vanhu vanotaura chiMandarin Chinese pasi pano. Ndiwo mutauro unonyanya kutaurwa uye kushandiswa munyika. Zvakawanda kukuudza kuti chatova chikonzero chakanaka chekuchidzidza: 860 miriyoni vanhu vekutaurirana navo. Kune zviriko makumi maviri nemana matauro muChina, akapararira kumatunhu. Nekudaro, Mandarin Chinese inonzwisiswa neruzhinji rwevanhu. Yakasarudzwawo semutauro wekutanga muPeople's Republic of China. Uye kunyatso tsanangura, tiri kutaura nezve Mandarin Chinese pano, asi isu tinogona zvakare kutaura nezve Mandarin kana "Standard Chinese" (iri zvirokwazvo mutauro mumwe chete!).
Inobatsira mune zvekune dzimwe nyika (uye kusimudzira yako CV) ^
China mutambi mukuru muhupfumi hwenyika. Uye pakati pehukuru hwayo mumisika yepasi rose uye huwandu hwevatauri kutenderera pasirese, iri kuwedzera kuve inonakidza. Kuidzidza (ingave yemuromo uye / kana ruzivo rwakanyorwa) zvirokwazvo chinhu chakakosha paCV, kunyanya muminda yekutengeserana kwepasirese, kushanya, bhizinesi ... Kune zvakare bvunzo yekuyera, iyo HSK bvunzo. Inozivikanwa (uye yakatsvaga ) nenyanzvi. Zvinogona kuve chinangwa chako chekutanga kutora bvunzo iyi, uyezve wozowana basa.
Ive nekuchenjerera zvakadaro, uchidzidzira Chinese, kungo wedzera mutsetse "Chinese: good level" paCV yako haikupe zvese kukurudzira uye kuranga kwaunoda kuti uidzidze. Iwe unofanirwa kutsvaga chikonzero chakaringana, icho chinokutendera iwe kuti uchengetedze kurudziro yako padanho repamusoro mukati mekudzidza kwako kwese. Kushanda kuChina, kuita bhizinesi nevaAsia, kugara muchikamu chino chenyika, kushanda mukushanya muFrance uine ruzivo rwakati nezve musika uyu… zvikonzero zvakanaka! Kudzidza Chinese kuisa mutsetse paCV yako hachisi chikonzero chakanaka.
Zvidzidze kunze kwekufarira chaiko mutauro uye tsika ...
Mutauro weChinese wakapfuma uye kune vakawanda unonakidza. Mutauro netsika zvinogona kuve zvido chaizvo. Kudzidza mutauro kunogona kukubatsira kuti unzwisise iyi tsika, kuwana mafirimu uye mabhuku muMandarin Chinese, asi zvakare uwane zvirinani uye nenzira yakanyudzwa: chikafu chayo, mushonga wechivanhu, huzivi, hunhu hwebasa, zvitendero kana hunyanzvi hwekurwa ... Kana iwe une shungu, ipapo unozokurudzirwa kudzidza. Zvekare, ichi chikonzero chakanaka uye chikonzero icho chingakutorere iwe kure mukudzidza.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti semimwe mitauro yakawanda, pane akawanda mazwi uye zvirevo zvinoratidza Chinese tsika. Uye zvinonakidza kutaura izvi zvetsika dzechiChinese kuburikidza nekunyora kwake.
Nzira yekudzidza Chinese nhasi? ...
Dzidza chiChinese uri wega, uri wega uye pamhepo ^
Zvishandiso zvakawanda zvinokutendera kuti udzidze mutauro wega. Kuti udzidze Mandarin Chinese zvakare. Nzira dzatinokurudzira kuburikidza newebsite yedu, uye kazhinji nemitauro yese, dzinogona kushandiswa kudzidza mutauro waConfucius.
Zvirongwa zvekudzidza mitauro ^
Iwo maapplication anopa akati wandei zvakwakanakira mukudzidza mutauro. Anogona kushandiswa parunhare saka ndokutevera kwese (mukutakura, paunoita mutambo wako, mumutsetse wezvitoro zvikuru…). Ivo vanotumira Notices kana iwe "uchida" kudzidza izvo zvinoramba zvichidzidza kuenda. Chekupedzisira, zvinoitirwa kuve nyore kushandisa, zvinoshanda uye zvinobudirira.
Iko kunyorera kudzidza Mandarin kubva kuMosaLingua kunokutendera iwe kuti udzidze mazwi uye zvirevo, kubva padanho A1 - kutanga - kusvika padanho C1 - kumberi. Iine makadhi echinyorwa anodarika 2000, ane mazwi anonyanya kushandiswa uye zvirevo. Kubatsira kwekushandisa kwedu, kunze kwekugona kwenzira iyi, ndeyekuti iyo inokutendera iwe kuti udzidze mazwi uye madudziro awo… izvo zvinokutendera kuti utaure "nekukasira".
Iyo inowanzo-kutaurwa Pleco app zvakare chishandiso chakanaka. Iri munzira duramazwi remabasa akawanda. Unogona kutsvaga hunhu kana izwi muPinyin (fonetiki zvinyorwa), uye iyo app inokupa hunhu, zvarinoreva, madudziro aro, mitsara ...
Ehezve, zvakakosha kuti usarudze chirongwa chaunonzwa kugadzikana nacho. Chikumbiro chinokutendera kuti ufambire mberi, uye chengeta mupfungwa dzako wega chinangwa (chingave chekutaurirana, kunyora, kufamba, kuwana basa kuChina). Usazeze kuenzanisa maapplication, nzira dzekudzidza, uye zvirimo. Kune izvi, iwe unowana yemahara vhezheni yedu yeMosaLingua kunyorera yatinokurudzira kuti utange.
YouTube nemavhidhiyo emabatsiro ekudzidza ^
Vazhinji vadzidzisi kana vakapusa vanozvidzidzisa-vadzidzi vakagadzira nzira dzeYouTube kubatsira vanokurudzirwa kudzidza kuburikidza nemavhidhiyo. Zvakanakira mavhidhiyo zvakawandisa (yakakura yakawanda, yemahara, yekuita), asi mukana wekutanga ndewekuti iwo anotendera iwe kuti udzidze emuromo / odhiyo / inotaurwa Chinese! Mandarin Chinese iwe waunogona kushandisa zvakananga kutaurirana nevanozvarwa. Uye kana chinangwa chako chiri kutaurirana, saka ndizvo zvakanaka.
Kunze kwemataurirwo uye "kutaura", mamwe mavhidhiyo kana chiteshi zvinogona kumutsa madingindira anonakidza ekudzidza kwako: mazwi, kubatanidza, nezvimwe. Semuenzaniso, tinokurudzira nzira:
Usazeze kutsvaga nzira dzinonakidza uye dzakakodzera dzechinangwa chako wega, nekungonyora muYouTube yekutsvaga bar "dzidza Chinese".
Masosi epamhepo ^
Kuti uenderere mberi nendima yapfuura, ziva kuti kupfuura YouTube nzira, pane mavhidhiyo mapuratifomu atinokurudzira zvikonzero zvakafanana. Kunyanya, iwe unogona kushanyira Youku uye Tudou saiti iyo inokupa iwe kuwana kune yakawanda yevhidhiyo zviwanikwa.
Kune zvakare akawanda mawebhusaiti uko iwe kwaunogona kudzidza mutauro, kana zvirinani tora mukana izvo zviwanikwa zvinobatsira pakudzidza kwako. Mutauro, girama, kuumbana, hurongwa hwekunyora, matoni, zvimwe zvidzidzo ... Uchawana zvese zvaunoda pamasaiti epamhepo. Dambudziko nderekuti, hauzodzidza imwe nzira, uye kudzidzisa dzimwe nguva kunodiwa mumitauro inozivikanwa kunge yakaoma. Tataura izvozvo, huwandu uhwu hwezviwanikwa zviripo chaizvo chishandiso chikuru chekuenderera kumberi.
Tinokurudzira, semuenzaniso, maChinese eEuropean (akagadzirwa mukutanga kweEuropean Union), China Tsika kana kunyange Chine In inounza pamwechete zvidzidzo zvakawanda.
Dzidza uchiperekedzwa nevadzidzisi ^
Sezvataona, Indaneti ikozvino inoita kuti zvive nyore kudzidza mutauro uri wega. Nekudaro, kune avo vanofanirwa kutarisirwa, kutungamirirwa mukudzidza kwavo, ziva kuti iwe unogona zvakare kudzidza Mandarin Chinese nemudzidzisi. Izvi zvinogona kuve online kana kumeso-kumeso, boka kana wega Chinese zvidzidzo. Iyi ndiyo nzira yakanakisa kana iwe uchinzwa kuti iwe unoda kudzidziswa kuti ufambire mberi. Saiti senge Kugadzirira kana Verbling dzinokutendera iwe kunakirwa zvakasarudzika zvidzidzo nevadzidzi vepamhepo (zvemubhadharo). Iwe unofambira mberi padanho rako wega uye iwe zvakare unobatsirwa kubva kune rairo kuraira kwevanyanzvi vadzidzisi. Iyi inzira inoshanda, asi pano inobhadhara.
Kusarudza nzira nemhinduro dzakakukodzera, zvese zvinoenderana nechinangwa chako chandingati. Kana iwe uchida kudzidza mutauro neshoko rako wega kuronga rwendo mukati megore, unogona kutanga wega neapp uye zviwanikwa zviripo online. Kana iwe uchida kudzidza nekukurumidza kusangana neyakagoverwa, chaiwo mazwi, uye kutaura kwakanaka, saka zvakavanzika zvidzidzo imari yakanaka. Chero zvazvingaitika, kudzidza chiMandarin Chinese pamwe nekudzidza mitauro yakawanda, kuwedzera zvitsigiro uye nzira zvinogona kukubatsira. Iwe nekudaro uchabatsirwa kubva pane kugona kwemunhu wese, uye iwe uwedzere zviwanikwa kuti uve nekuona kwakakwana kwemutauro wechiChinese netsika.
Inguva yakareba sei kudzidza chiChinese?
Mubvunzo uri kubvunzwa nemunhu wese. Kugona chiMandarin chiChinese pamunwe wako, ruzha rwese, mataurirwo akakodzera, mazwi akanyanya kugona… zvinotora nguva. Uye iyo nzira iri kumberi haisi iyo iri nyore kwatiri maFrancophones. Nzira yekuziva chiSpanish ingaite senge iri nyore kudivi!
Nekudaro, kuziva matauriro padanho rekutanga kana repakati muMandarin Chinese hakusi iko kwakaomarara, uye kuri mukati memunhu wese. Kubva kune vese vane kurudziro, kutsunga, uye nzira dzakakodzera uye maturusi. Kudzidza Chinese, senge kudzidza chero mumwe mutauro, kunovimba zvese pakutsunga kwemudzidzi, maturusi uye zviwanikwa zvinoshandiswa, uye kuenderana. Isa zvitatu izvi pamwechete, uye iwe uchaona kuti kudzidza kwako kuchafamba zvakanaka. Saka, yakareba sei chaizvo? Izvo zvese zvinoenderana nechinangwa chako, nguva yakashandiswa kuidzidza, uye kutsunga kwako.
Taura Chinese ^
Nei uchifanira kudzidza Chinese? Kuti utaure, handizvo here? Mupfungwa iyi, kana iwe uchidzidza mutauro weChinese (senge chero mumwe mutauro, ndinoreva) zvakakosha kuti utarise paunyanzvi hwayo hwekutaura futi. Ive nekuchengera zvakadaro, Mandarin Chinese hausi mutauro unozivikanwa kuve nyore kudzidza, kunyanya kune yayo 4-toni kududza. Asi, sezvatakataura pamusoro, nenzira kwayo, maturusi akakodzera ekutsigira kudzidza kwako uye kurudziro, hapana chikonzero nei usingakwanise.
Ndedzipi idzi "toni" dzinomutswa? Zvakanaka, izwi rimwe chete muchiChinese rinogona kuva nezvarinoreva zvina kana richidudzwa zvakasiyana. Muenzaniso wakanakisa ndewekuti: mā (= amai), má (= hemp), mǎ (= bhiza) uye mà (= kutuka). Mavara maviri, mana mazwi akasiyana, mana matoni akasiyana. Pakarepo, 4. ichokwadi kuti kudzidza nekutaura chiChinese kunogona kutyisa, asi 4. tinoonawo kukosha kwekudana kwakanaka kana kuti pano, toni chaiyo. Izvo zvakakosha pakutaurirana muchiChinese.
Uye mamiriro acho…
Matauriro acho akakosha, asi handiyo yega inosvitsa meseji. Chirevo chakakoshawo. Ini ndataura Spanish pamusoro, asi mupfungwa iyi Spanish ne Mandarin Chinese zvakafanana (zvishoma) zvakafanana. Chokwadi, muchiSpanish, zvirevo zvemunhu hazvishandiswe: hatizoti ndinodya, iwe unodya, anodya… Tichati "idya, idya, idya". Aya ndiwo mamiriro ezvinhu anotibvumira kuti tinzwisise kuti tiri kutaura nezvaani (uye kupera kwechiito). Kune maChinese pano, icho chinhu chakafanana chinhu: ndiwo mamiriro anotitendera kuti tinzwisise zvinhu zvakawanda mumutsara. Iwe hauzive kana "ma" iwe waunonzwa achireva bhiza kana amai? Zvakanaka, zvibatsire nemamiriro ezvinhu. Saizvozvo, hauna chokwadi here kushandisa matoni muMandarin Chinese? Usatombo kunetseka, mamiriro acho pasina mubvunzo anotendera wako anopindirana kuti azive zvazviri.
Maturusi ekukubatsira iwe kutaura Chinese ^
Kushanda pamataurirwo ako, matoni uye nekutaurirana kwako, unogona kushandisa maturusi akasiyana. Kunyangwe ukatanga kudzidza uku uri wega.
Kune mawebhusaiti anounganidza uye anotarisisa marekodhi anotendera iwe kuteerera kune chaiwo madudziro uye matoni. Ndiri kureva kunyanya forvo. Iwe unongoda kutaipa izwi mupinyin (fonetiki kudhindisa, uye mavara echiLatin) kana muchiChinese hunhu kuti uterere kune ma audios akanyorwa nevanhu vemunyika ino.
Yedu Anwendung yekudzidza Chinese inokupa iwe mazwi echiratidziro, uye madudziro avo akanyorwa nemunyori mutauri Iwe teerera kune izwi rine toni chaiyo uye mataurirwo akakodzera.
Kuwedzera kune wega muperekedzi, ziva kuti iwe une mukana wekusangana vepamhepo vadyidzani vaunotaura navo. MaNative vanhu vanoda kudzidza chiFrench semuenzaniso uye vaunogona kutaura navo zvishoma muMandarin Chinese uye zvishoma muchiFrench. Tiri kutaura nezvekuchinjana mutauro, uye zvinonakidza kwazvo kushanda pakutaurisa kwako mumuromo. Usapotsa chinyorwa chedu kuti uwane wekuChina mutori wenhau.
Chinese kunyora ^
Isu tinowanzo kunzwa kuti, nyore, Mandarin Chinese haisanganisi conjugations, declensions kana mamwe matambudziko erudzi urwu. Ichokwadi, asi chenjera: mutauro une mamwe matambudziko. Iyo yekunyora sisitimu ndeimwe yacho, uye inomiririra gehena yedenho kune mafrancophones. Kutanga iwe unofanirwa kuziva kuti Mandarin Chinese haina chaizvo arufabheti. Izwi rega rega rinoumbwa neumwe kana anopfuura mavara atinodaidza kuti sinograms (uye ayo atinogona kufunga mutsika yedu semadhirowa). Saka hatifanire kudzidza mavara, asi kuti tidzidze mavara aya. Neraki, pane zvekare zvishandiso zvakawanda zviripo zvekukubatsira iwe kudzidzira chikamu chemutauro, kunyangwe uri kuzvidzidzira wega kana kwete.
Maturusi ekukubatsira iwe kudzidza Chinese kunyora ^
Kana iri yekudzidza mazwi, kune maapplication ekuti iwe udzidze mavara. Kana kuti kare, kuti uzive neiyi nyowani yekunyora system ... Pakutanga kuona, mavara aya anogona kuita kunge akaomesesa. Uye zvakare, iwe unofanirwa kudzidza zvinoreva asi zvakare madudziro, wozviziva nekuzvinyora. Hazvisi nyore.
Nekudaro, maturusi mazhinji anotendera iwe kuti utarisane nedambudziko iri.
Iyo Skritter app (muChirungu) yakakurudzirwa kwatiri kakawanda. Ichi chishandiso chinoshandisa, saMosaLingua, iyo yakapatsanurwa nzira yekudzokorora kuti ikubatsire kudzidza mavara, kuvaziva, kuvadana uye kuvanyora.
Chineasy ndechimwe chishandiso chinobatanidza pictogram uye sinogram kuti ushandise yako yekuyeuka ndangariro, uye kukubatsira iwe kudzidza mavara.
Iwe unogona zvakare kuwana mamwe maapplication nekutaipa "Chinese kunyora" kana "Chinese kunyora" pane iTunes kana Google Play.
Zvekare, iyo Chine tsika saiti yakanyanya kupfuma zviwanikwa, maturusi uye kurovedza muviri kuti ikubatsire iwe kudzidza mutauro. Nekudaro, iwe unowana zvidzidzo zvinoverengeka zvakanangana nekunyora kweChinese. Kufanana neiyi, kune akawanda mawebhusaiti ayo anokubatsira iwe kuti unzwisise zvirinani wobva wadzidzira kunyora kwechiChinese.
Iyo Chine Nouvelle saiti, semuenzaniso, inokupa iwe mafaera (emahara) netsananguro yevatambi, uye izvo zvinokuratidza mashandisiro aungaita nemazvo.
Chenjera zvakadaro, kunyangwe kana kudzidza kunyora chiChinese kuchikosha uye kunakidza, kudzidza kwako hakufanirwe kuganhurirwa kune izvo. Tinodzokorora: kutaurirana nemuromo kwakakosha kwazvo kuti titaure. Usatarise pane zvakanyorwa, asi tsvaga mukana wakaringana pakati pezvakanyorwa nezvakataurwa.
Ndizvozvo kudzidza Mandarin Chinese. Ehe, iwe uchawana misoro yekudzidza chiChinese inogona kukufarira pane yedu saiti. Tinokukoka iwe kuti ushanyire chikamu cheChinese chesaiti yedu. Chekupedzisira, tinokukoka kuti utarise pane peji rezvinhu zvekudzidza Chinese. Uye usazeze kutibvunza mibvunzo yako yese pano! Waita zvakanaka kuverenga nyaya ino kusvika kumagumo. Wakafungei nezvazvo? Ndokumbira utisiire tsamba, inotikurudzira kunyora zvimwe zvinyorwa
5/5 (1 vhoti)
Wakafarira chinyorwa ichi? Joinha kirabhu yeMosaLingua mahara
Vanopfuura vanhu 3 MILLION vanobatsirwa nazvo, wadii iwe? Zviri 100% mahara:
Tanga kudzidza kwako kweMandarin Chinese
Iwe unoda kudzidza Mandarin Chinese?
Nhau Dzakanaka Kutanga: Tinogona Kubatsira Iwe Yechipiri Nhau Dzakanaka: Unogona Kutanga Iye Zvino Mahara! Ita kuti muedzo wako wepachena utore iyi nzira inoshanda yekudzidza Mandarin Chinese kwemazuva gumi nemashanu.
Flashcards yekudzidza mazwi, mavhidhiyo mune yepakutanga vhezheni ine zvinyorwa zvidiki, mabhuku ekuteerera, zvinyorwa zvinoenderana nedanho rako: MosaLingua Web inokupa mukana kune izvi zvese, uye nezvimwe zvakawanda! Kutanga ipapo ipapo (zviri mahara uye hazvina njodzi).
Zvinyorwa zvinogona kukufarira: